ရက်စွဲ။ ။ 28-7-2008
အကြောင်းအရာ။ ။ ကျောင်းဝင်းအတွင်း မလိုလားအပ်သော စည်းကမ်းများအား အတင်းအကျပ်လိုက်နာခိုင်းနေခြင်းများအား တားဆီးပါယ်ဖျက်ပေးပါရန်တင်ပြခြင်း။
အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ကျောင်းဝင်းအတွင်းကျောင်းသားကဒ်မချိတ်ပါက ” နောက်နောင် ကျောင်းသားကဒ်ချိတ်ပါမည်၊ ပါမောက္ခမှခေါ်ယုဆုံး မပြီးဖြစ်ပါ သည် ဟု ကိုယ်တိုင်ရေးသား ခံ ၀န် လက်မှတ်
ရေးထိုးခိုင်းခြင်း၊ အကယ်၍့ ကျောင်းသားကဒ် မချိတ်ဆွဲပါက အဆောင်ထဲသို့ပေးမ၀င် ခြင်း။
၄င်းအပြင် ကျောင်းအတွင်း အနက်ရောင်ပါသော အ၀တ်အစား မ၀တ်ရဟု စည်းကမ်း ထုတ်ခြင်း အကယ်လို့ 
၀တ်ဆင်မိပါက ကျောင်းအတွင်းသို့ ပေးဝင်သော်လည်း အဆောင်အတွင်း ပေးမ၀င်ပဲ စာသင်ယူခွင့် ကိုပိတ်ပင်
စသည့် စည်းကမ်းချက်များသည် ကျတော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်မလိုလားအပ်သော စည်းကမ်း
ချက်များဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် သုံးသပ်မိပါ သည်။ သရုပ်ပျက်အ၀တ်အစားများဝတ်ဆင်ခြင်းမပြုရဆို
သည့် စည်းကမ်းကို ကျောင်းသားအများစုမှ လက်ခံနိုင်ဘွယ်ရာရှိသော်လည်း မြန်မာ့ ရိုးရာ ၀တ်စုံဖြစ်သော ယော
လုံချည်၊ ယော ထမီ တို့ ကို အနက်ရောင် ပါသည့် အတွက် ၀တ်ဆင်ခြင်းမပြု ဟုဆိုသော အချက်မှာ လည်း လက်
ခံနိုင်စရာ မရှိပါ။ သို့ အပြင် အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များသည် အေးချမ်းစွာ ပညာ သင် ကြား လိုသော ကျောင်းသား
များ အား မကျေမနပ်ဖြစ်စေခြင်းမှ တဖန် ဆရာနှင့် တပည့် များ အကြား မလိုလား အပ်သော တင်းမာမှုများဖြစ်
ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။သို့ အတွက် တက္ကသိုလ်အဆင့် တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များ မှာ မလိုလားအပ်သော စည်းကမ်းများဖြစ်နေပြီးကျောင်းသား
များ အတွက် လွတ်လပ်စွာ ၀တ်စား ဆင်ယင်ပိုင်ခွင့်ကို ထိပါးနေခြင်းနှင့် ကျောင်းအတွင်းကျောင်းသားကဒ် မချိတ်
ပါက အဆောင်တွင်းဝင်ပြီး ပညာသင်ယူခွင့် ပိတ်ပင်ခံရမည် ဆိုသည့်စည်းကမ်းသည်လည်း တက္ကသိုလ်အဆင့်တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသားများ အတွက် ကျောင်းဝင်းအတွင်းလွတ်လပ်စွာ ပညာသင်ယူပိုင် ခွင့် နှင့်
လွတ်လပ်စွာ သွားလာပိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်နေပါသဖြင့် ထိုသို့ အတင်းအကျပ် ပြုလုပ်ပြီး မလိုက်နာမနေရ စည်းကမ်း
များ ချမှတ်နေခြင်းကို လာမည့်ကျောင်းသီတင်းပါတ်အတွင်း အမြန်ဆုံး တားဆီးပါယ်ဖျက်ပေး ပါရန်တောင်းဆို
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/31/20080အကြံပြုခြင်း
MIN KO NAING "Conqueror of Kings"
"Min Ko Naing" or "Conqueror of Kings," is the nom de guerre of one of the most prominent public figures in Burma's struggle for democracy and human rights.
Asiaweek Fighting "a Bad King"(Interview/ Min Ko Naing)
Asiaweek article (October 28, 1989)
"........ I'll never die. Physically I might be dead, but many more Min Ko Naing would appear to take my place. As you know, Min Ko Naing can only conquerabad king. If the ruler is good, we carry him on our shoulders..........."
ကောက်သစ်ပေါ်ဦး၊ ဆန်ပြဿနာနှင့် နေပြည်တော်ဘယ်လဲ ...
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 31 2008 16:45 - မြန်မာစံတော်ချိန်
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့များအတွင်း နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းတို့တွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အများအပြားရှိခဲ့၏။ ပထ၀ီ အပိုင်းအခြားအရမူ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသနှင့် စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်း ဒေသတို့ ဖြစ်သည်။ မြို့နယ်ပေါင်း ၄၇ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာပေါင်း ၃၅၀၀ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့၏။ စစ်အာဏာပိုင်တို့၏ ထုတ်ပြန်မှုအရပင် သေဆုံးသူနှင့် ပျောက်ဆုံးသူ အပေါင်းမှာ တသိန်း သုံးသောင်းကျော် ရှိပြီး၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ရသူပေါင်းမှာ ၂ ဒဿမ ၅ သန်း ရှိသည်ဟု ဆို၏။ ကျေးရွာသားများ ဖြစ်ကြသည်
ပျက်စီးမှု၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျေးလက်တွင် ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ အသက်မွေးမှု အတတ်ပညာက လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ပျိုးကြဲမည်။ ထွန်ယက်မည်။ ကောက်စိုက်မည်။ ရိတ်သိမ်းမည်။ မြန်မာ့ လယ်ယာလုပ်ငန်းက စက်မှုလယ်ယာ မဟုတ်…..။ ကြွက်သားအားနှင့် စွမ်းအင်ပြုရသည့် လက်မှုလက်ယာ …..။
နာဂစ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွင် ဧရာဝတီတိုင်းသည် အများဆုံး ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့၏။ တနိုင်ငံလုံး သေဆုံးသူနှင့် ပျောက်ဆုံးသူပေါင်း၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ရသူပေါင်း ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိ၏။ ဧရာဝတီတိုင်းက မြန်မာ့မြေယာ လုပ်ငန်း၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအား ထုတ်လုပ်မှုပေး၏။ နှစ်စဉ် စပါးတင်း သန်းပေါင်း ၄၀၀ ခန့် ထွက်ရှိသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးမြေ ဧကပေါင်းမှာ မိုးစပါး စိုက်ဧက ၃၅ သိန်းကျော် ၃၅၀၈၂၉၁ ရှိပြီး နွေစပါး စိုက်ဧကမှာ ၁၄ သိန်းကျော် ၁၄၂၁၈၆၀ ရှိသည်။ FAO ၏ အစီရင်ခံစာအရ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးမြေ ဧက သိန်း ၂၀ ကျော်သည် ဆားငန်ရေများ ဖုံးလွှမ်း၍ ပျက်စီးခဲ့ပြီး ဧက-၅ သိန်းကျော်သည် လယ်ယာလုပ်ငန်း လုံးဝ လုပ်ကိုင်၍ မရအောင် ပျက်စီးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဆားငန်ရေ ၀င်ရောက်ခဲ့သည့် လယ်မြေဧက သိန်း ၂၀ ကျော်တွင် ပြန်လည်၍ စိုက်ပျိုးနိုင်သည် ထားဦး …… အထွက်နှုန်းကမူ ယခင်ကကဲ့သို့ ထွက်ရှိတော့မည်မဟုတ် …. လျော့မည်သာ ……။ အလျော့အနည်းနှင့် အလျော့အများသာ ကွာမည်။ ထားတော့…..။
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း မိုးစပါးရာသီ၌ လယ်မြေဧက သိန်း ၃၀ ခန့် စိုက်ပျိုး၍ ရသည်ဆိုလျှင်ပင် ပထမ ပြဿနာက လယ်ယာလုပ်သား ပြဿနာ ဖြစ်၏။
လယ်မြေ ၁၀ ဧကခန့်အား လုပ်ကိုင်လျှင် လယ်ဦးစီးတယောက် လို၏။ ကိုယ်တိုင် မလုပ်ကိုင်နိုင်ပါက လယ်ဦးစီးအား `စာရင်းငှား´ ငှားရသည်။ သူက …. `ကဆုန်လ´ လဆန်းမှစ၍ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရပြီ….။ ကန်သင်းတွေ ပြင်ရမည်။ လယ်တဲ ပြင်၊ ထင်းစု…..။
`တမံ´ ညက်အောင် ထွန်ရမည်။ `ကဆုန်လပြည့်´ ကျော်သည်နှင့် မိုးလေက မှန်ပြီ။ ဤတွင် ပျိုးခင်း၌ ပျိုးကြဲရမည်။ ပျိုးသက်က ရက်သတ္တ ၅ ပတ်မှ ၆ ပတ်မျှရှိပြီး၊ ဤအတွင်း စိုက်နိုင်ရမည်။ ကျော်၍မဖြစ်။ ကျော်လျှင် ပျိုးပင်များ `ခွ´ လာမည်။ ခွလာလျှင် ပျိုးနုတ်ရာ၌ အပျက်အစီး များမည်။ သို့ဖြစ်၍ ပျိုးသက်မရင့်မီ ပျိုးနုတ်ကောက်စိုက် လုပ်ရမည်။ ဤတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်၌ လယ်ယာလုပ်သား အများအပြား လိုအပ်လာမည် ဖြစ်သည်။ အချိန်နှင့် လုပ်ရသည့်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ လုပ်အားများများ သုံးရမည်။ လယ် ၁၀ ဧကခန့်တွင် ပျိုးနုတ်၊ ကောက်စိုက်လုပ်သား ၁၀ ယောက်မှ ၁၅ ယောက်ခန့်လိုသည်။ ပျိုးပင်မခွမီ ပျိုးပင်များအား ပျိုးခင်းမှ လယ်ကွက်အတွင်းသို့ ပြောင်း၍ စိုက်နိုင်ရမည်။ ဤအတွက် လယ်ယာလုပ်သား လို၏။ ဤလုပ်အားအား လယ်ကွက်အတွင်းသို့ ဖြည့်တင်းနိုင်မှ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည့် လယ်မြေများတွင် စပါးစိုက်နိုင်မည်။ ဤအရေးက မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခံရခြင်း မရှိသည့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းများမှ လူများအား ပေါ်တာဖမ်းပြီး လုပ်ခိုင်း၍မရ…..။
`ခရာ´တွက်၍ ပျိုးခင်းများဖြစ်မလာ။ `၀ီစီ´မှုတ်၍ ကောက်ပင်များမဖြစ်။
ဒုတိယ ပြဿနာက မျိုးစပါး ပြဿနာ ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်၌ `မျိုးစေ့´ ထုတ်လုပ် ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီးများ မရှိ။ မိမိ၏ မျိုးစေ့အား မိမိဘာသာ ချန်၍ စိုက်ပျိုးကြခြင်း ဖြစ်သည်။ လယ်သမားသည် လယ်သိမ်းပြီးပါက မျိုးစပါးအား သီးသန့် သိမ်းကြရ၏။ ကျန်သည်ကိုမှ မဖြစ်မနေ ပေးရမည်တို့အား ပေး……။ ပြီးမှ ၀မ်းစာထားကြသည်။ မျိုးစပါးအား မိမိစိုက်မည့် လယ်နှင့် တွက်၍သာ ထားတတ်ကြသည်။ ပိုမထားကြ။ စပါးတဧကအတွက် မျိုးစပါး ၂ တင်း (၃၂ ပြည်) ခန့်လို၏။ နာဂစ်ကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း မျိုးစပါး ပျက်စီးမှုသည် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ ဆားငန်ရေ၀င်သည့် လယ်မြေများအပါအ၀င် ပြန်လည် စိုက်ပျိုး၍ရမည့် လယ်မြေများ၌ စပါးပြန်စိုက်နိုင်ရန် မျိုးစပါးတင်းရေ ၆ သန်းခန့် လိုသည်။ မည်သို့ ဖြည့်ဆည်းမည်နည်း ……။ စစ်အုပ်စု ယခုပြုလုပ်နေသည့် နည်းနှင့်မူ မည်သို့မျှ မဖြစ်နိုင်။
စစ်အုပ်စုက ဧရာဝတီတိုင်းအတွက် လိုအပ်မည့် မျိုးစပါးများအား မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှု မခံရသည့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းများရှိ လယ်သမားများထံမှ သိမ်း၍ ဧရာဝတီတိုင်းသို့ ဖြန့်သည်။ လယ်သမားတို့၏ မျိုးစပါး ချန်ထားမှုက နောက်နှစ် မိမိစိုက်မည့် လယ်ဧကနှင့် တွက်၍သာ သိမ်းကြ၏။ ချန်ထားတတ်ကြ၏။ ပိုပိုလျှံလျှံ မထား…။ ယခုကဲ့သို့ စိုက်ပျိုးရာသီမျိုး၌မူ လယ်သမားတို့၏ စပါးကျည်အတွင်း ၀မ်းစာစပါးပင် မရှိကြတော့။ ပြီးလျှင် …. မျိုးစပါးဟူသည်က ၀မ်းစာစပါးကဲ့သို့ ထား၍မရ….. ဂရုစိုက်ရသည်။ မိုးရေအထိမခံ … . မိုးရေနည်းနည်းပါးပါး ထိသည်နှင့် အညှောက်ထွက်လာနိုင်သည်။ ဤအတွက် မုန်တိုင်းမထိသည့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းများမှ လယ်သမားများထံတွင်လည်း မျိုးစပါးဟူသည် ပိုပိုလျှံလျှံမရှိ……။ ခွဲဝေပေးရန် မဖြစ်နိုင်။
တတိယပြဿနာက လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံး ကုန်ထုတ်ကိရိယာ ဖြစ်သည်။ နာဂစ်မတိုင်မီ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း ကျွဲ၊ နွားကောင်ရေ ၁ ရာခိုင်နှုန်း ၅ သန်း ရှိသည်။ နာဂစ်ကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း၌ ကျွဲ၊ နွား ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် သေကြေ ပျက်စီးခဲ့သည်။ မြန်မာ့ လယ်ယာကဏ္ဍက စက်မှုလယ်ယာ မဟုတ်…..။ ကျွဲ၊ နွားနှင့် ဖက်၍ ထွန်ယက် နေကြရဆဲ….။ လယ် ၁၀ ဧကအား ထွန်တတုံး၊ နွားတရှဉ်းနှင့် ထွန်လျှင် ၁၅ ရက်ခန့် ထွန်ရသည်။ အချိန်နှင့် လုပ်ရသည်။ ကဆုန်၊ နယုန် လများက ထွန်ယက်မှု ပြီးစီးရမည့် အချိန် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ပျိုးသက်မရင့်မီ လယ်ကွက်အတွင်း၌ ကောက်စိုက်၍ ပြီးမည် ဖြစ်သည်။ ဤတွင် မုန်သုန်မိုးက မိုးမှန်လေမှန်ဖြစ်ပြီ…….။ ယခုမူ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း လယ်ပြန်စိုက်၍ရမည့် လယ်ကွင်းများ၌ ဧက ၇၀၊ ၈၀ ခန့်တွင် ထွန်တတုံး၊ နွားတရှဉ်းနှင့် ထွန်ယက်နေကြရသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း လယ်မြေများ ထွန်ယက်ပြီးစီးရန် မည်မျှကြာမည်နည်း……။ မုန်သုန်မိုးက စောင့်မည်မဟုတ်……။
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွှန်းပေါ် ဒေသနှင့် စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်းတို့က မြန်မာ့လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး၏ အဓိက အသက်သွေးကြော နေရာများဖြစ်သည်။ နာဂစ်ကြောင့် ဤသွေးကြောမကြီးများ ပေါက်ပြဲခဲ့ရပြီ…..။ မြန်မာ့လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပျက်စီးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မိုးစပါးထွက်ရှိမှုတွင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျ၍သွားနိုင်သည်။ စစ်အုပ်စု၏ ကိန်းဂဏန်းအရ …. ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဆန်စပါး ထွက်ရှိမှုသည် မက်ထရစ်တန်ချိန် ၁၉ သန်းခန့် ရှိသည်ဟု ဆို၏။ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုမှာ ၁၈ ဒဿမ ၉၅ သန်းခန့်ရှိရာ မြန်မာ့ဆန်စပါး ထုတ်လုပ်မှုသည် ပြည်တွင်း ဖူလုံရုံမျှသာ ရှိသည်။ ထွက်ရှိမှုနှင့် စားသုံးမှုသည် ညီမျှ၍နေပြီး အရံဆန်စပါးဟူ၍မရှိ…..။
မြန်မာ့လယ်ယာ လုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဦးရေ၏ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းအား အလုပ်အကိုင် ပေးထားသည်။ ဆန်စပါးက မြန်မာတို့၏ အဓိက စားသောက်ကုန်ဖြစ်၍ အသက်သွေးကြော သီးနှံဟု ဆိုရမည်။ မြန်မာ့လယ်ယာ လုပ်ငန်းနှင့် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ၌ ရှိခဲ့၏။ ဤအတွက်ပင် စပါးအား နိုင်ငံရေး သီးနှံဟုပင် ၀ိဂြိုဟ်ပြုကြ၏။ သမိုင်းစဉ်၌ မြေယာ အကျပ်အတည်းကြောင့် တော်လှန်ရေးကြီးများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြ၏။ ဆန်ပြဿနာကြောင့် အရေးတော်ပုံကြီးများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြ၏။
လာမည့်နှစ် ကောက်သစ်ပေါ်ဦးက ….. နေပြည်တော်အဖို့ ကြီးမားသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်မှာ မလွဲ …..။
ဆွေမျိုးအားလုံးကောင်းစားအောင်လုပ်ပြီးမှ ၀န်ကြီးရာထူးက ထွက်မည်
NEJ/ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ဆွေမျိုးသားချင်းများအား အထူးစောင့်ရှောက်သည်ဟု ၀န်ထမ်းများကြား နာမည်ကြီးသည့် နေပြည်တော်စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းသည် ရာထူးမှထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးမလုပ်မီ "ငါ့ဆွေမျိုးအားလုံးကောင်းစားအောင်လုပ်ပေးပြီးမှ ၀န်ကြီးရာထူးကထွက်မယ်" ဟု မကြာခင်က ပြောခဲ့သည်။
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးများတက်ရောက်သည့် နေပြည်တော်စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာန အီးစီ အစည်းအဝေးတခုတွင် စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်း ယခုကဲ့သို့ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော် သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။ မည်သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ပြောသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးသော်လည်း ၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းအား ၀န်ကြီးဌာန တခုလုံးနီးပါး သဘောမကျဟု ၀န်ထမ်းများက ပြောသည်။
၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် အရေးအခင်းများတွင် ဆန္ဒပြပြည်သူများကို ရိုက်နှက်ဖို့ကိစ္စ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူအာဏာပိုင်များထဲမှာ တဦးအပါအ၀င်ဖြစ်သည်ဟု စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာန အရာရှိများ၏ စွပ်စွဲခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။ ဆွေမျိုးသားချင်း ကောင်းစား ရေးဝါဒ လက်ကိုင်ထားသည့် ၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းသည် အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲ၌ ၄င်း၏ဇာတိ တောင်သာမြို့နယ် ကျောက်ကာကျေးရွာမှ (၆၂) ရာနှုန်းသာ ထောက်ခံမဲရသည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။
အမေရိကန် ငွေကြေးဒဏ်ခတ်သည့် စစ်အစိုးရကုမ္ပဏီများပုဂ္ဂလိက စီးပွားဘက်ကျဆင်း
မင်းနိုင်သူ/ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
မြန်မာအစိုးရ ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ (၁၀) ခုကို ငွေကြေးဆိုင်ရာဒဏ်ခတ်လိုက်ကြောင်း အမေရိ ကန်အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ့မှ ကြေညာပြီး မကြာခင် အဆိုပါကုမ္ပဏီများနှင့် စီးပွားလုပ်ရသည်မှာ တွက်ခြေမကိုက်တော့ကြောင်း လုပ်ငန်းရှင် များက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် စီးပွားရေးကိစ္စများ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ရေရှည်ရလဒ်ကောင်းများ ပေါ်ထွက်မလာနိုင်သည့်အပြင် မိမိတို့၏ရှိဆဲ ဥစ္စာဓနများပါ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ကြောင်း စစ်အစိုးရနှင့်ပက်သက်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခြင်း ဖြစ်သည်။
“စစ်အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးတွဲလုပ်ရတာဟာ ဆုပ်လည်းစူး၊ စားလည်းရူး ပါပဲ။ စင်ကာပူကို သဲတင်ပို့ နေတဲ့ ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီတွေလည်း စစ်အစိုးရရဲ့မတရားပြုမှုတွေ ခံခဲ့ရပါတယ်” ဟု စင်ကာပူသို့ သဲတင်ပို့နေသည့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတခုက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
သဲတင်ပို့ရောင်းချမှုကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းက စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရက ၎င်းတို့ ၏ စီးပွားရေးအင်အားစုများဖြစ်သည့် မြ၀တီ၊ မြန်ဂုဏ်မြင့် နှင့် ဗန္ဓုလကုမ္ပဏီတို့မှတဆင့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ (၁၂) ခုသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့တင်ပို့ခွင့်ရရှိရန် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများက စစ်အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီများသို့ စပေါ်ငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၃၀,၀၀၀) စီတင်ခဲ့ကြရသည်။ သို့သော် ယခုအခါ စစ်အစိုးရကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ စပေါ်ငွေများ ပြန်မအမ်းဘဲ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ (၉) ခု၏ ပြည်ပသဲတင်ပို့ခွင့်များကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ရာ လက်ရှိတင်ပို့နေသည့် ကုမ္ပဏီ (၃) ခုသာ ရှိတော့သည်ဟု ယင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများက ပြောသည်
ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ (၃) ခုသည် မြစ်သဲများကို သံလွင်နှင့် ဂျိုင်းမြစ်တို့မှ ထုတ်ယူခဲ့ကြပြီး မြစ်သဲ (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉) ဒေါ်လာရရှိပြီး မြ၀တီထရေးဒင်းလိမိတက်သို့ (၃) ဒေါ်လာ ခွဲ ပြန်လည်ပေးဆောင်ရကြောင်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတခုက ပြောဆိုသည်။
အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး မိမိတို့လုပ်ငန်းတွင်လည်း ကြုံတွေ့ရကြောင်း Royal Green Manufacturing co, Ltd မှ ဒါရိုက်တာဟောင်း တဦးကလည်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
၎င်းက “စက်မှု (၂) ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး က.စ.လ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းစက်ရုံ အခုတော့ National ပေါ့။ အဲဒီစက်ရုံကို ကျပ်သိန်း (၂,၀၀၀) ကျော် အကုန်ကျခံပြုပြင်ပြီး (၁၀) နှစ်တာ လွှဲ ပြောင်းရယူလုပ်ကိုင်ဖို့ ကတိပြု စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ၅/၃/၂ ပုံစံနဲ့လုပ်ကြဖို့ပေါ့။ ၅/၃/၂ ဆိုတာက ပထမ စာချုပ်သက်တမ်း (၅) နှစ်၊ ပြီးရင် စာချုပ်ထပ်ချုပ် (၃)နှစ်ဆက်လုပ်၊ ပြီးရင် (၂) နှစ် စာချုပ် ထပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ ပုံစံပေါ့။ ဒါပေမယ့် (၄) နှစ်ခွဲပဲ လုပ်လိုက်ရပြီး စက်ရုံကို ပြန်အပ်လိုက်ရပါ တယ်” ဟု ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
အမေရိကန်အစိုးရ ထုတ်ပြန်လိုက်သော ငွေကြေးပိတ်ဆို့မှု၏ ရလဒ်အဖြစ် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်၏ လက်ခွဲကုမ္ပဏီလေးခုဖြစ်သည့် မြန်မာ ပတ္တမြားအင်တာပရိုက်စ်၊ မြန်မာအင်ပါရီယယ် ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီ လိမိတက်၊ မြ၀တီ ကုန်သွယ်ရေး လိမိတက်နှင့် မြ၀တီဘဏ် လိမိတက် တို့ကိုလည်း နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သားများ၊ အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးမလုပ်ရန် နာမည်ပျက်ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
ယခုငွေကြေးပိတ်ဆို့မှုထဲတွင် စစ်အစိုးရပိုင် မြန်မာ့ သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံ အမှတ်(၁) သတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၊ အမှတ် (၂) သတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အမှတ် (၃) သတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတို့ကိုလည်း သတ်မှတ်ထားသည်။ သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ သမ၀ါယမ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းလည်း ပါဝင်သည်။ ။
ဘိုကလေးနယ်မှ ဒုက္ခသည်များ ရိက္ခာလို
ကိုဝိုင်း/ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ဘိုကလေးမြို့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမှ နေရပ်ရင်းရွာများသို့ ပြန်ကြရသည့် လေဘေးသင့်သူ များထံ၌ (၃) လစာသာ ရိက္ခာကျန်ရှိတော့သဖြင့် အစားအစာပြတ်လပ်မည်ကို စိုးရိမ်နေကြကြောင်း ဘိုကလေးမြို့မှ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတဦးကပြောသည်။
“အခု သူတို့လက်ထဲမှာ ဆန်နည်းနည်း၊ ပဲနည်းနည်းပဲ ရှိတာပေါ့။ အ၀တ်အစားလည်းမလိုဘူး၊ ကျန်တဲ့ ထောက်ပံ့တဲ့ဟာတွေလည်း မလိုဘူးပေါ့။ သူတို့မှာ အဓိကလိုအပ်တာကတဲ့ ဆန်၊ ဆီပေါ့ အဲဒါလေးတွေ လိုအပ်ပါတယ်တဲ့။ တကယ်လို့ အလှူရှင်များရှိရင် သူတို့ရွာတွေကို လွှတ်ပေးဖို့၊ လှူဒါန်းပေးဖို့ ကျနော်တို့ကို ပြောပြတယ်” ဟု အဆိုပါ ကူညီရေးလုပ်သားကပြောသည်။
ယူနီဆက်ဖ်ကဲ့သို့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တခြားအန်ဂျီအိုများက အပိုင်းလိုက် အုပ်စုခွဲ၍ သွားလာကူညီနေကြသော်လည်း ဘိုကလေးမြို့မှ ပဲ့ထောင်ဖြင့် (၂) နာရီကျော်ခန့် သွားရပြီး ချောင်းကြိုမြောင်းကြားများအတွင်း တည်ရှိနေသော မယ်တော်စု၊ ခေတ်ဆန်း၊ ကွင်းကြီး ငါးအိမ်တန်းစသည့် ရွာများသို့ ကူညီသူရောက်ရှိမှုနည်းသဖြင့် ရွာသားများက အစားအစာ ပြတ်လပ်မည်ကို စိုးရိမ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
နေရပ်ရင်းပြန်ရောက်သူများထဲမှ လယ်ယာလုပ်သားများသည် ၎င်းတို့အား လယ်ပိုင်ရှင်များက ငှားရမ်းခြင်းမရှိသဖြင့် ပို၍ အခက်ကြုံနေကြရကြောင်း၊ ယခင်က လယ်စိုက်ပျိုးရာသီပြီးဆုံးသွား ချိန်တွင် ဓနိလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ယခုအခါ မုန်တိုင်းကြောင့် ဓနိပင်များလည်း ပျက်စီး ခဲ့သဖြင့် အထောက်အပံ့ကိုသာ မျှော်နေကြရကြောင်း အဆိုပါဒေသများသို့ မကြာသေးမီက ရောက်ခဲ့သူ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားကပြောသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားက “လယ်ပိုင်ရှင်တွေက မငှားကြဘူး။ မုန်တိုင်းကြောင့် လယ်တွေပျက် တော့ ခါတိုင်း (၁၀) ဧက လောက် လုပ်နိုင်တဲ့လူက အခု (၂) ဧကလောက်ပဲ လုပ်နိုင်တော့တယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ရှိတဲ့မိသားစုလေးနဲ့ပဲ လုပ်ကြတာပေါ့။ နောက်တခါ လယ်လုပ်ငန်းပြီးသွားရင် ဓနိလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်း ဓနိပင်တွေက မရှိတော့ဘူး။ ဓနိချိုးစရာ မရှိဘူးပေါ့။ အဲဒီအခါ ကျတော့ အထောက်အပံ့ပဲ စောင့်စားနေကြရတာပေါ့” ဟုပြောသည်။
အစားအစာပြတ်လပ်မည်ကို စိုးရိမ်နေကြသည့် အဆိုပါ ရွာသားများသည် မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးကာစက ဘိုကလေးမြို့ပေါ်ရှိ ကျွန်းညိုကျောင်း၊ ရတနာပုံစာသင်တိုက်၊ အထက (၁)၊ အလက (၁)၊ ဆရာတော်ဦးဥာဏ်ကျောင်း စသည့်နေရာများတွင် လာရောက်ခိုလှုံခဲ့သူများဖြစ်ပြီး နေရပ်ရင်းသို့ မိမိသဘောဖြင့် ပြန်သူများရှိသကဲ့သို့ အာဏာပိုင်များ၏ အဓမ္မပြန်ခိုင်းမှုကြောင့် ပြန်ရသူများ လည်းရှိကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
ထို့အပြင် နေရပ်ရင်းပြန်ရွာသားများသည် ၎င်းတို့၏နေအိမ်အမိုးအတွက် ယူနီဆက်ဖ်နှင့် အိုင်အို
အမ်တို့မှ ကူညီသော တာလဘတ်များကို အသုံးပြု၍ရသော်လည်း အကာအတွက်မူ မုန်တိုင်း တိုက်ပြီးနောက် ပျက်စီးကျန်ရစ်ခဲ့သော သစ်တိုသစ်စ၊ ပျဉ်တိုပျဉ်စများကိုသာ အသုံးပြုကြရ ကြောင်း သိရသည်။ ။
နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန် ဘန်ကောက်၌ ဆန္ဒပြတောင်းဆို
ပီတာအောင်/ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများကို ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး (ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာ) ရုံးက နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု၍ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးရန် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများက ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဘန်ကောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ ရုံးရှေ့၌ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူ (၆၀) ကျော်တို့သည် ဘန်ကောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂရုံးရှေ့ သို့သွားရောက်၍ မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး၊ ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာ့အရေးဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးရေး စသည့်ပိုစတာများနှင့် ကြွေးကြော်သံများ အော်ဟစ်ကာ (၁) နာရီကျော်ကြာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြသူတဦးဖြစ်သည့် မြန်မာ့ဒုက္ခသည်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင် ကိုစိုးအောင်က
“ကျနော်တို့ အဓိကဆန္ဒပြတာတော့ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတွေကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ အမြန်ဆုံးဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးဖို့ပါ။ နောက်တခုက ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရုံးကနေပြီးတော့ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဒုက္ခသည် အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့ ကျနော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ” ဟု ပြောသည်။
ဘန်ကောက်ရှိ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတို့၏ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသစ်လျှောက်ထားမှုများကို ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာက ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက အသစ်လက်မခံတော့သည့်အပြင် လျှောက် ထားပြီးသူတို့၏ လျှောက်လွှာများကိုလည်း အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိတော့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမခံရဘဲ ဘန်ကောက်မြို့၌ အခက်အခဲတွေ့နေသူ (၁) ထောင်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၌နေထိုင်ခွင့် အထောက်အထား တစုံတရာ မရှိသဖြင့် ထိုင်းရဲ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက မြန်မာနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ခံရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိနေသည်ဟု ဆန္ဒပြသူ ကိုဆန်ကြီးက ပြောသည်။
ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက် လူငယ်အဖွဲ့ဝင် ကိုဇော်မင်းက “ကျနော်တို့ကို ယူအန်က ဘာမှ လုပ်မပေးဘဲ ဒီအတိုင်းပဲထားထားတယ်။ တကယ့်ဒုက္ခသည်မဟုတ်တဲ့ လူတွေကျတော့ ပိုက်ဆံယူပြီး ယူအန်က တတိယနိုင်ငံကို ပို့ပေးနေတယ်။ ကျနော်တို့ နေရေးထိုင်ရေးအခက် အခဲတွေ့နေတယ်။ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလည်းမလွယ်ဘူး။ ယူအန်အနေနဲ့ တခုခုလုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာပါ” ဟု ပြောသည်။
ဆန္ဒပြသူအချို့ကို ကုလသမဂ္ဂရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက တွေ့ဆုံပြီး တောင်းဆိုချက်များကို လက်ခံယူခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာသို့ ဆက်လက် တင်ပြပေးမည်ဟုသာ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ။
၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင်၏ဇနီးကို အခွန်ရှောင်မှုဖြင့် ထောင်သုံးနှစ်ချ
Agencies/ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ တပ်ဆင်၏ဇနီး ပွတ်ဂျမန် တရားရုံးသို့ မိသားစုနှင့်အတူ ရောက်လာစဉ်
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင်၏ဇနီး ပွတ်ဂျမန်သည် အခွန်ရှောင်လွှဲမှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ထိုင်းတရားရုံးတခုမှ ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ် ကျခံစေရန် အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။
ပွတ်ဂျမန်၏ မောင်နှင့် သူမ၏ အတွင်းရေးမှူးသည်လည်း ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် တပ်ဆင်မိသားစုပိုင် တယ်လီကွမ်းလုပ်ငန်းတွင် အစုရှယ်ယာများလွှဲပြောင်းရာ၌ အခွန်ငွေ ထိုင်းဘတ် (၅၄၆) သန်း ရှောင်တိမ်းမှုဖြင့် အပြစ်ရှိသည်ဟု တွေ့ရှိရသည်။
ပွတ်ဂျမန်၏မောင် ဘန်နာပေါ့ကိုလည်း ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ် အပြစ်ပေးခံရပြီး အတွင်းရေးမှူးကို လည်း ထောင်ဒဏ် (၂)နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအမှုသည် တပ်ဆင်မိသားစုကို စွဲဆိုထားသည့် အမှုတွဲများတွင် ပထမဆုံးအမှုဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်သည် ယခု သူ့မိသားစု၏ အခွန်ရှောင်လွှဲမှုအပါအ၀င် သူ့ကို စွပ်စွဲထားသော အဂတိလိုက်စားမှုများ အားလုံးကို ငြင်းဆန်ခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။
ထိုင်းတရားရုံးက တပ်ဆင်၏ဇနီး ပွတ်ဂျမန်နှင့် အပေါင်းအပါ နှစ်ယောက်အား အာမခံငွေ ထိုင်းဘတ် (၅) သန်းဖြင့် ပြန်လွှတ်ထားသည်ဟု တရားရုံးအရာရှိတဦးက ပြောသည်။ ပွတ်ဂျမန်အနေဖြင့် ထိုအမှုကို အယူခံဝင်မည်ဟုလည်း အများက မျှော်လင့်နေကြသည်။
တပ်ဆင်၏ နိုင်ငံရေးလက်တွဲဖော်လည်းဖြစ်၊ စီးပွားရေးလက်တွဲဖော်လည်းဖြစ်သည့် ပွတ်ဂျမန်ကို ထိုင်းတရားရုံးက အပြစ်ရှိသည်ဟု အမိန့်ချမှတ်ခဲ့မှုတွင် ပွတ်ဂျမန်အနေဖြင့် သတိလစ်မတတ် ဖြစ်သွားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ရာဇ၀တ်တရားရုံးသို့ ပွတ်ဂျမန်သွားရာတွင် တပ်ဆင်သည် ဇနီးဖြစ်သူနှင့် အဖော်လိုက်ပါ သွားခဲ့ရာ တပ်ဆင်မိသားစုပြန်အလာကို ထောက်ခံသူ ရာပေါင်းများစွာသော ပရိသတ်များက လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကာ ကြိုဆိုကြသည်။ ၎င်းတို့နှင့်အတူ သားသမီးသုံးယောက်လည်း လိုက်ပါ လာသည်။
တရားရုံးတ၀ိုက်တွင် တပ်ဆင်ကိုထောက်ခံသူများနှင့် ဆန့်ကျင်သူများ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားမည်စိုးသောကြောင့် လုံခြုံရေးရဲဝန်ထမ်း (၃၀၀) ကျော် နေရာချထား ရသည်။
ယနေ့အမှုမှာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ရှင်နာဝါထရာ ကွန်ပျူတာ ကုမ္ပဏီ (နောင်တွင် ရှင်းကော်ပိုရေးရှင်း ဖြစ်လာသည်။ ရှင်းကော်ပိုရေးရှင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်) အတွင်း အစုရှယ်ယာ လွှဲပြောင်းမှုတွင် အဓိကထားသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ထိုကုမ္ပဏီကို စင်ကာပူအစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီတခုအား ဒေါ်လာ (၂.၂) ဘီလီယံဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည်။
ထိုကုမ္ပဏီတွင်း အစုရှယ်ယာ လွှဲပြောင်းမှုတန်ဖိုးပမာဏမှာ ဘတ်ငွေ (၇၃၈) သန်းရှိပြီး အခွန် ဆောင်ခြင်းမရှိဟု ယူဆထားသည်။ တပ်ဆင်မိသားစုသည် ထိုအစုရှယ်ယာ လွှဲပြောင်းမှုကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသော စတော့ဈေးကွက်အတွင်း ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခြင်းဟုသာ စာရင်းပြခဲ့သည်။
တပ်ဆင် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးမှ ရပ်ဆိုင်းခံရပြီးနောက်တွင် ထိုကိစ္စအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာမှ အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသည် မိသားစု၏ အိမ်စေ တယောက်ထံမှ ရှယ်ယာများကို ၀ယ်ယူကာ ထိုရှယ်ယာများကို မွေးစားမောင်ဖြစ်သူ ဘာနပေါ့ ဒါမာပေါင်အား လွှဲပြောင်းပေး ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုလုပ်ရပ်မှာ ထိုင်းဥပဒေအရ အခွန်ကောက်ခွင့်မရှိဟု ပွတ်ဂျမန်ကလည်း ၎င်း၏ရှေ့နေမှတဆင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် အိမ်စေသို့ပေးသော ငွေများမှာ နောင်တွင် ဘဏ်အသစ်တခု၌ ပွတ်ဂျမန်၏ ဘဏ်စာရင်းဖြင့် အပ်နှံထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်ဟု ထိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးရေးကော်မတီက ဆိုသည်။
ပွတ်ဂျမန်နှင့် မောင်ဖြစ်သူသည် အခွန်ရှောင်လွဲလိုခြင်းကြောင့် ငွေလွှဲပြောင်းမှုသဘာဝကို မှားယွင်းစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် အခွန်ငွေ ဘတ် (၅၄၆) သန်း ပေးသင့်သည်ဟု ကော်မတီက ပြောသည်။ ထိုအခွန်ရှောင်လွဲမှုတွင် တပ်ဆင်အနေဖြင့် ငြိစွန်းခြင်း မရှိချေ။
အကျိုးစီးပွားချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ရှောင်လွဲလိုသောကြောင့် တပ်ဆင်သည် ၀န်ကြီးချုပ်မဖြစ်မီကတည်းက ရှင်းကော်ပိုရေးရှင်းမှ ရှယ်ယာများကို သူ့ အိမ်စေ၊ ဒရိုင်ဘာ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် အခြားသူများထံ လွှဲပြောင်းမှု ပြုလုပ်ထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
တပ်ဆင်သည် အာဏာအလွဲသုံးစားပြုလုပ်သည့် အမှု (၃) ခုဖြင့်လည်း တရားစွဲဆိုထားခြင်း ခံနေရပြီး ၎င်း၏ အမှုများကို ဗဟိုတရားရုံးချုပ်မှ ကြားနာမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါက သူ့အနေဖြင့် အယူခံဝင်၍ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် စစ်တပ်မှတင်သွင်းသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်အောက်တွင် နိုင်ငံရေး သမားများနှင့် ပတ်သက်လျှင် တရားစီရင်မှုရေးရာတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်များတိုးမြှင့်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင်မိသားစုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စွဲဆိုထားသည့်အမှုများ ပုံနေသောကြောင့် ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အာဏာအကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းမှာ တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ပင် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ။
ပုဂ္ဂလိကပိုင် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများ ချပေးတော့မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေ
ဧရာဝတီ် | ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၈
မြန်မာစစ်အစိုးရ အနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူများကို နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့် ပါမစ်များ ချပေးတော့မည်ဟူသည့်သတင်း မြန်မာ စာနယ်ဇင်း အသိုင်းအဝန်းမှ ထွက်ပေါ် လျှက်ရှိသည်။
ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းမှ ရရှိသော သတင်းများအရ မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်ကို နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ အဖြစ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေမည်ဟု ကြားသိရသည်။
ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်တွင် အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် မစ္စတာရော့စ် ဒန်ကလေက မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံစံကို ပြောင်းလဲ တော့မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ သော စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အနေနှင့် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ ထုတ်ဝေရေးကို အာသီသထား ဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း ရေးသားထားသည်။
မြန်မာတိုင်းမ်စ်ဂျာနယ်ကို ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အာဏာရှိစဉ်က လေတပ် ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဆွေ၏ သား ဆန်နီဆွေ ရှယ်ယာပါဝင်ကာ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံရေးအတွက် အသုံးချရန် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုအခါလည်း နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးအတွက် ၎င်းဂျာနယ်ကို စစ်အစိုးရက အသုံးချရန် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ အဖြစ် ထုတ်ဝေခွင့် ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာသူတို့က သုံးသပ်သည်။
မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် မစ္စတာ ရော့စ်ဒန်ကလေသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် အာဏာရှိစဉ်က ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိများနှင့် နီးစပ်သူဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိစစ်အစိုးရနှင့်လည်း အဆင်ပြေသူဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မေလက ကျင်းပခဲ့သော ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ မတိုင်မီက မြန်မာ စ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်ကို ထောက်ခံကြောင်း ၎င်း၏ ဂျာနယ်တွင် ရေးသားခဲ့ဖူးသူလည်း ဖြစ်သည်
နေ့စဉ် သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ခွင့်ပြုနိုင်ခြေ ရှိသောကြောင့် လက်ရှိ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဂျာနယ် ထုတ်ဝေလျှက်ရှိသော မြန်မာ တိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်သာ ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းဂျာနယ် တစောင်မှ အယ်ဒီတာ တဦးက သုံးသပ်သည်။
“သတင်းတွေကို သာမန်ပြည်သူတွေဆီ ဗုန်းပေါလအော ရောက်စေချင်ပုံမရဘူး။ နေ့စဉ် ထုတ် သတင်းစာဆိုတော့ စိစစ်ရေး အတွက်လည်း တော်တော်လေး တာဝန်ကြီးတယ်။ နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်လိုပဲ အစမ်းသဘော ချပေးမယ် လို့ ထင်တယ်။ ကျနော်တို့ ထုတ်ဝေခွင့်ရချင်ရင်တော့ အင်္ဂလိပ်လို ဂျာနယ်ထုတ်နိုင်အောင် အရင် လုပ်ရ ဦးမယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုအခါတွင် မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်က ဝန်ထမ်းသစ်များ ထပ်မံခန့်ထားလျှက် ရှိပြီး ထိုဝန်ထမ်းသစ်များ အားလုံးမှာ တခြားသော သတင်းဂျာနယ်များတွင် အတွေ့အကြုံ ရှိပြီးသူများဖြစ်ကာ လစာအနေဖြင့် မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်က ပိုမိုရရှိသောကြောင့် ကူးပြောင်း အလုပ်လုပ်လိုကြသည်ဟု သိရသည်။
လတ်တလော အခြေအနေတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းနှင့် နီးစပ်သူများ ဖြစ်ကြသော မြန်မာတိုင်းမ်စ်၊ ဝိကလီး အလဲဗင်း စသည့် ဂျာနယ်များ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်များနှင့် ဇူလိုင်လ အတွင်းက သီးခြား တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်သတင်းဂျာနယ် အသိုင်းအဝန်းမှ ကြားသိရသည်။
လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေအရ မြန်မာဘာသာဖြင့် နေ့စဉ် သတင်းစာ ထုတ်ဝေရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် ထိုသို့ ထုတ်ဝေခွင့် ပြုလိုက်လျင် စာပေစိစစ်ရေးအနေနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ နိုင်နင်းနိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်း ရန်ကုန်မီဒီယာဂရု(ပ်) ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးကိုကိုက သုံးသပ်သည်။
“ပုဂ္ဂလိက အပြည့်အဝပိုင်တဲ့ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာမျိုးကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဖက်စပ် ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်” ဟု သူကပြောသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းနှင့် နီးစပ်သည့် ဂျာနယ်တစောင်ဖြစ်သော ဝိကလီးအလဲဗင်း ဂျာနယ်ကမူ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း၏မေးမြန်းချက်ကို မည်သည့်ထင်မြင်ချက်မျှ မပေးချေ။
ကုလသမဂ္ဂမှ မြန်မာ့အရေး ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ရန် အတိုက်အခံများ တိုက်တွန်း
ကိုစိုး | ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၈
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းနှင့် ၎င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂန်ဘာရီတို့အား မြန်မာ့အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်တိုက်တွန်းထားသော ကြေညာချက်တစောင်ကို ယနေ့တွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားနေသည့် အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့က ပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက် သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ နှင့် ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်တို့က “မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂမှ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး တိုက်တွန်းချက်”ဟူသော အမည်ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အချက် ၆ ချက်ပါ ယင်း ကြေညာချက်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့က မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းထံပေးပို့ ခဲ့သော ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦး၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ထောက်ခံကြောင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီဝင် များနှင့် အရွေးချယ်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စစ်အစိုးရ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိ အမှတ်မပြု ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် မဟုတ်ဟူသော ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်အား ထောက်ခံ ကြောင်းတို့ကို ဖော်ပြ ထားသည်။
ထို့အပြင် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ ၏ မြန်မာနိုင်ငံအရေး ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်အောင်မြင်မှုမရှိကြောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂအနေနှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး နှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးတို့အတွက် ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်တို့ကိုလည်း ယခုကြေညာ ချက်တွင် တိုက်တွန်း တောင်းဆိုထားသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုထွန်းမြင့်အောင်က ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက ဆုံးဖြတ် ချက်ချထားသည့် အားလုံးပါဝင်နိုင်မည့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခုအချိန် အထိ အကောင် အထည်မပေါ်သေးသောကြောင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကုလသမဂ္ဂတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု ပြောသည်။
“ယူအန်အနေနဲ့ ဘန်ကီမွန်း အနေနဲ့ သူလုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စတွေကို အားစိုက်ပြီး မလုပ်ဘဲ ၀တ်ကျေတန်းကျေ စကားလုံး တွေနဲ့ သံခင်းတမန်ခင်း အနေနဲ့လုပ်တာမျိုးမလုံလောက်ဘဲနဲ့ လက်တွေ့ကျပြီး ထိရောက်တဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက်မျိုးတွေနဲ့ လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်၊ လမ်းပြမြေပုံ နောက်ကိုပဲ လိုက်သွားစေမယ့် အပြောအဆိုမျိုးတွေနဲ့ ချည်းပဲ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစု တွေကို တောင်းခံရုံနဲ့ ဒီမိုကရေစီမရသွားနိုင်ဘူး၊ နအဖ စစ်အုပ်စု အနေနဲ့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေး စားပွဲပေါ်ရောက်လာအောင် ယူအန်က ကြိုးစားရပါမယ်၊ နောက်တခုက မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ အခု လာမယ့် သြဂုတ်လအတွင်း မလာခင် မှာ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ သဘောထားဟာ ဒီလိုရှိပါတယ် ဆိုတာကို ပြတ်ပြတ်ထင်ထင် ပြောခြင်းဖြစ်တယ်”ဟု ကိုထွန်းမြင့်အောင်က ပြောဆိုသည်။
ယခု ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကုလသမဂ္ဂသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်၍ အဓိက အနေနှင့် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းထံသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကိုထွန်းမြင့်အောင်က ဆက်လက်ပြီး“ယူအန်ကိုပို့ပါတယ်၊ အဓိကက ဘန်ကီမွန်းဆီပို့တာပါ၊ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲက ရွေးချယ်ခံ ထားရတဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဒီနေ့အထိရှိနေသေးတယ်၊ ကျနော်တို့ ၃ ဖွဲ့ရဲ့ သဘော ထားကလည်း အဲဒီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ သဘောထားအတိုင်း ရှိ တယ်လို့ ပြောချင်တယ်၊ ကျနော်တို့ သဘောထားဟာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအားလုံးနဲ့ တသားတည်းဆိုတာ ကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောချင်တယ်” ဟုလည်း ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂန်ဘာရီသည် စစ်အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်ဖြင့် လာမည့် သြဂုတ်လ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ယခုလအလယ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မဇ္ဈိမ နှင့် DVB ဝက်ဘ်ဆိုဒ် များ တိုက်ခိုက်ခံရ
အေးလဲ့ | ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၈
ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းဌာနနှစ်ခု၏ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များကို တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသဖြင့် ပုံမှန် ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလို အခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီ အခြေစိုက် မဇ္ဈိမ မြန်မာပိုင်းသတင်းဌာနတို့၏ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို မလိုလားသူများက နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသုံးပြုတိုက်ခိုက် ခံခဲ့ရသည့်အတွက် ယင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်များရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ကောင်းမွန်စွာဖတ်ရှုမရ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
ဇူလိုင်လ ၂ဝ ရက်နေ့ကတည်းက ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီး DVB ဝက်ဘ်ဆိုဒ် http://www.dvb.no ကို ရပ်ဆိုင်းသွား စေရန် ကြိုးပမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း DVB ၏ ဒုတိယအမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်းက ယခင်အပတ် သောကြာ နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“နည်းပညာအရ တိုက်ခိုက်မှု၏ နောက်ကွယ်တွင် မည်သူရှိသည် ဆိုသည်ကို ပြောဆိုရန်မှာ ခက်ခဲကြောင်း၊ သို့သော်လည်း သည်တိုက်ခိုက်မှု၏ နောက်ကွယ်တွင် မြန်မာအစိုးရရှိကြောင်း အလွယ်တကူ ပြောနိုင်သည်” ဟု ဦးခင်မောင်ဝင်းက ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောဆိုထားသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန၏ ဝက်ဘ်မာစတာကလည်း တိုက်ခိုက်မှု၏ နောက်ကွယ်တွင် မည်သူ ရှိနေမည်ဆိုသည်ကို သိရှိရှာဖွေ ရန်မှာ ခက်ခဲသော်လည်း ဤဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုများသည် တရုတ်၊ ရုရှ၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံများရှိ ဆာဗာများကို အသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“အဓိကကတော့ မလိုလားတဲ့သူတွေက နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကို အသုံးပြုပြီး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တခုကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ သာမန်စာဖတ်သူ ဦးရေထက် ၁၀ ဆလောက်ရှိတဲ့ စာဖတ်သူဦးရေ ဆင့်ပွားပြီး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ၀င်ကြည့်လိုက်တဲ့ အတွက် ဝက်ဆိုဒ်က ရပ်သွားတာတို့၊ အရင်ကလိုကောင်းကောင်း မွန်မွန် ကြည့်မရတာတို့ ဖြစ်သွားတာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာနဆိုဒ်၏ ယာယီဝက်ဘ်ဆိုဒ် သတင်းတွင် ယင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် နည်းပညာ အခေါ်အရ (Distributed Denial of Services – DDoS) attack ဖြစ်ပြီး တိုက်ခိုက်နည်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ကြည့်ရှုမရစေရန် ဖြစ်ကြောင်းတို့ကို ရေးသားထားသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန၏ ဝက်ဘ်မာစတာက “ကျနော်တို့ဆိုဒ်မှာကတော့ နေ့စဉ် သတင်းတွေကို back up လုပ်ထားပြီးဖြစ်တော့ အခုမဇ္ဈိမ မြန်မာပိုင်းသတင်းတွေကို ယာယီ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ http://burmese.mizzima.com စီစဉ်ထားပါတယ်” ဟု လည်း ပြောသည်။
အလားတူပင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၇ ခု နှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်းကလည်း ဧရာဝတီ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုလည်း Trojans Virus ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး ၎င်း Virus ကို ၄ ရက်ကြာ အချိန်ယူ ရှင်းထုတ်ခဲ့ရကြောင်း ဧရာဝတီ ၀က်ဘ်မာစတာ က ပြောသည်။
အဆိုပါ ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းဌာနများသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းထုတ် ပြန်မှုများ၊ ဝေဖန်ရေးသားမှုများ ပြုလုပ်သောကြောင့် စစ်အစိုးရက ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု လေ့လာသူ များက ပြောဆိုသည်။
လူရွှင်တော် ဇာဂနာနှင့် အားကစားအယ်ဒီတာ ဇော်သက်ထွေးတို့ ပထမအကြိမ် ရုံးထုတ်
ကိုသက် | ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၈
နာဂစ်မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေစဉ် စစ်အစိုးရ၏ ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် လူရွှင်တော် ဇာဂနာ၊ အားကစားအယ်ဒီတာ ဇော်သက်ထွေးတို့ကို ယမန်နေ့က အင်းစိန်ထောင်တွင် သီးသန့်ရုံးထိုင်ထားသည့် အနောက် ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ပထမဆုံးအကြီမ် ရုံးထုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်ရှေ့နေအသိုင်းအ၀န်းနှင့် နီးစပ်သူတဦးက အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
ကိုဇာဂနာနှင့် ကိုဇော်သက်ထွေးတို့နှင့်အတူ တခြား အမည်မသိသူ ၂ ဦးလည်း ရုံးထုတ်ရာတွင်ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့က ကိုဇာဂနာနှင့် ကိုဇော်သက်ထွေးတို့ကို အင်းစိန်ထောင်တွင်း၌ ရုံးထုတ်ခဲ့သော်လည်း အာဏာပိုင် တို့က မိသားစုဝင်များအား အကြောင်းကြားခြင်း မရှိပေ။ ကိုဇာဂနာ၏ မိသားစုဝင်တဦးကို ဧရာဝတီက ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က ကိုဇာဂနာနှင့် ကိုဇော်သက်ထွေးအား အင်းစိန်ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ချုပ်နှောင်ထားကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုသော်လည်း ယမန်နေ့ ရုံးချိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း က အကြောင်းမကြားသဖြင့် မသိရသေးကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“အခုထိ ဘာမှလာပြီး အကြောင်းမကြားသေးဘူး။ ပုဒ်မတပ်ပြီး ရုံးထုတ်မယ်လို့တော့ ကြားတယ်” ဟု ကိုဇာဂနာ၏ မိသားစုဝင်က ပြောသည်။
ကိုဇာဂနာနှင့် ကိုဇော်သက်ထွေးတို့သည် လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို စာပေ၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ဂီတနယ်ပယ်တို့မှ အနုပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်အပြီး တလခန့် အကြာတွင် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၄၀၀ ကျော်တို့နှင့်အတူ ကယ်ဆယ်ရေးအပြင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကိုပါ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု ကိုဇာဂနာ အဖမ်းမခံရစဉ်က ဧရာဝတီကို ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။
ကိုဇာဂနာကို လွန်ခဲ့သည့် ဇွန်လဆန်းက ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိနေအိမ်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး လေဘေးကယ်ဆယ် ရေးလုပ်ငန်းများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် စီဒီ ဓာတ်ပြားတချပ်၊ ရမ်ဘို အပိုင်း ၄ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပြား၊ စိန်စီ သောည စီဒီ ဓာတ်ပြား၊ ကွန်ပျူတာ Hard Disk တလုံး၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တထောင်နှင့် FEC ၃၀ တို့ကို အာဏာပိုင်တို့က သိမ်းယူ သွားခဲ့သည်။
ကိုဇာဂနာ အဖမ်းခံရပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုဇော်သက်ထွေးနှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးအောင်လွင်တို့က ဆက်လက်ဦးဆောင်ခဲ့သော်လည်း ကိုဇော်သက်ထွေး အဖမ်းခံရပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကိ်ုဇော်သက်ထွေးကို အာဏာပိုင်တို့က မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းရှိ မကွေးမြို့တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ကိုဇာဂနာနှင့် ကိုဇော်သက်ထွေးတို့ကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖမ်းဆီးထားသည်ကို အာဏာပိုင်တို့က ၎င်းတို့၏ မိသားစု ၀င်များအား အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း မရှိပေ။
ကိုဇာဂနာ အဖမ်းခံရပြီး တပတ်ခန့်အကြာတွင် မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် သစ်က လူရွင်တော် ဇာဂနာကို အကြောင်းပြချက်မပေးဘဲ စစ်အစိုးရက ထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီး ထားသည်နှင့်ပတ်သက်၍ အလွန် စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
လာမည့် သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ကိုဇာဂနာ၊ ကိုဇော်သက်ထွေးတို့အား ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်မည်ဟုလည်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတပ်ဆင် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဘာကြောင့် ဘတ်ငွေ သန်း (၄,၀၀၀) ချေး
သတင်းထောက် ဟန်တင်အောင်/ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ တပ်ဆင် လက်ထက်တွင် ထိုင်း EXIM ဘဏ်မှ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ချေးခဲ့သည့် ဘတ်ငွေ သန်း (၄,၀၀၀) ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သည့်အမှုကို မကြာခင် ဘန်ကောက် တရားရုံးချုပ်က စစ်ဆေးတော့မှာ ဖြစ်သည်။
ထိုင်းစစ်အစိုးရ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ပူးပေါင်းကူညီသွားမည့်အကြောင်း ထိုင်း EXIM ဘဏ် ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်သည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ တပ်ဆင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်း ဝန်ကြီးချုပ် လုပ်ပိုင်ခွင့် ကို အသုံးချပြီး ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အကျိုးရှိအောင် လုပ်သွားသည့် အဂတိလိုက်စားမှုများရှိသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည့် အမှုများစွာရှိသည်။ ထိုအမှုများထဲမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ စီမံကိန်းများအတွက် ထိုင်းအစိုးရက ဘတ်သန်း (၄,၀၀၀) ချေးသည့်ကိစ္စလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် မပြုတ်ခင် (၅) လအလိုမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရပိုင် MFTB ခေါ် မြန်မာ့နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ်ကို ထိုင်း EXIM ဘဏ်ကနေ ဘတ်ငွေ သန်း (၄,၀၀၀) ကို အတိုး (၃) ရာနှုန်းနှင့် (၁၂) နှစ်အတွင်း ပြန်ပေးရမည်ဆိုသည့် စာချုပ်ဖြင့် ချေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါငွေတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လမ်းဖောက်လုပ်ရေးကိစ္စ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေအတွက် သုံးစွဲမှာဖြစ်ပြီး ၄င်းစီမံကိန်းတွေအတွက် ပစ္စည်းတင်ပို့ပေးမည့် ထိုင်းပို့ကုန်ကုမ္ပဏီ (၁၆) ခုမှာ အကျိုးရှိနိုင်သည်ဟု ထိုင်း EXIM ဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ က ပြောသည်။
အထူးသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ မြန်မာစစ်အစိုးရအား ဘတ်ငွေ သန်း(၄,၀၀၀) ချေးလိုက်သည့် အတွက် ထိုင်းစက်မှုပစ္စည်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတွေ ထိုင်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကန်ထရိုက်တာတွေ ထိုင်း ရေနံဓာတုထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီတွေအတွက် ဝင်ငွေရမည့်အပြင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေပါ ရလာဘို့ အထောက်အကူဖြစ်သည်ဟု ထိုင်း EXIM ဘဏ်၏ ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ရေးထားသည်။
ထိုင်း EXIM ဘဏ်က ထိုင်းကုမ္ပဏီတွေအတွက် အကျိုးရှိပါသည်ဟု ပြောသော်လည်း မြန်မာ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ထိုအချိန်က စီးပွားဖက်နေသည့်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ တပ်ဆင်ပိုင် Shin ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၇) သန်း အကျိုးရှိမည် ဆိုသည်ကိုတော့ မစ္စတာ တပ်ဆင် က ပြောဆိုမသွားဘူးဟု နိုင်ငံခြားသတင်းများက ရေးသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရကို ထိုင်းအစိုးရကချေးသည့် ဘတ် သန်း (၄,၀၀၀) ထဲကနေ ဘတ် သန်း (၆ဝဝ) ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်အမြန်စနစ် တပ်ဆင်ပေးဖို့ မစ္စတာ တပ်ဆင် ပိုင် Shin ကော်ပိုရေး ရှင်းက ရခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် မပြုတ်ခင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်သားပိုင်သည့် Bagan Cybertech ကုမ္ပဏီအတွက် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ မစ္စတာ တပ်ဆင် ပိုင်
Shin ကော်ပိုရေးရှင်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခဲ့သည်ဟု The Nation သတင်းစာက ရေးခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နဲ့ ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနကနေ မစ္စတာ တပ်ဆင် ပိုင် Shin ကော်ပိုရေးရှင်းကို ဂြိုဟ်တုစနစ်သုံး အင်တာနက်အမြန်စနစ် တပ်ဆင်ပေးဖိ်ု့ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မစ္စတာ တပ်ဆင် လက်ထက်က မစ္စတာ တပ်ဆင် မိသားစုပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ တရှိန်ထိုး တက်လာသည့်အတွက် အမြတ်များများကျန်သည့် စတော့တွေကို တပ်ဆင် စတော့ ဆိုပြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဖောက်သည်တွေကို ပြောလေ့ရှိသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ တပ်ဆင် သည် အာဏာရပြီး (၅) နှစ်အကြာတွင် နိုင်ငံခြားသား ပိုင် ဆိုင်ခွင့် ရှယ်ယာအချိုး ဥပဒေကို (၂၅) ရာနှုန်းကနေ (၄၉) ရာနှုန်းထိ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပြီး မကြာခင် မစ္စတာ တပ်ဆင်ပိုင် Shin ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ရှယ်ယာ တန်ဖိုး ဒေါ်လာ သန်း (၂,၀၀၀) ထောင်နီးပါးကို စင်ကာပူအစိုးရပိုင် Temasak ကုမ္ပဏီသို့ ရောင်းလိုက်သည်။
မကြာခင် ထိုသို့ ရှယ်ယာတွေ ရောင်းခြင်းသည် အစိုးရကို မစ္စတာ တပ်ဆင် က အခွန်မဆောင်ဘူး ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်များ၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်က ထိုင်းပြည်တွင်းရေးမှာ ဝင်စွက်ခွင့်ရသွားပြီဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်များပေါ်ထွက်အပြီးမှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ တပ်ဆင် ကို ဆန့်ကျင်သည့် လူထု ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံး ထိုင်းစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းသည်ထိ ထိုင်းနိုင်ငံရေး ရှုတ်ထွေးခဲ့ရပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း မစ္စတာ တပ်ဆင်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘဲ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့မှာ သောင်တင်ရသည့် အဖြစ်ရောက်သွားခဲ့ရသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးရေး ကော်မတီက စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမည့် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ တပ်ဆင် လက်ထက် အဂတိလိုက်စားမှု ဦးစားပေးအမှုကြီး (၈) ခုထဲမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဘတ်ငွေ သန်း (၄,၀၀၀) ချေးလိုက်တဲ့ကိစ္စလည်း တခု အပါအဝင်ဖြစ်သည်ဟု ပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးရေးကော်မတီက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ သို့သော် အဆိုပါကိစ္စ စစ်ဆေးရာကနေ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ ဘက်က အဂတိလိုက်စားမှုများ ပေါ်ထွက်လာမလာဆိုသည်ကိုမူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရ သေးပေ။ ။
သမ္မတဘုရှ်၏ ထိုင်းခရီးစဉ် မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးမည်
Adaptation of Paula Wolfson’s Report in Burmese - အမေရိကန်သမ္မတ ဘုရ်ှနှင့် သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရှ်။ ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၀၈။
အမေရိကန်သမ္မတဘုရှ် (Bush) နဲ့ သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရ်ှ (Laura Bush)တို့ဟာ လာမယ့် ၅ ရက်နေ့မှာ ၇ ရက်ကြာအာရှသုံးနိုင်ငံခရီးစဉ် စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ၊
ဘန်ကောက်မြို့ကိုလည်း သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေ လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ သမ္မတကတော်
ဟာလည်း ဒုက္ခသည်စခန်းတခုနဲ့ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် ဆေးခန်းတို့ဆီသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ပေါ်လာ ၀ုဖ်ဆင် (Paula Wolfson) ပေးပို့ထားတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးကို
အခြေခံပြီး ကိုကျော်ကျော်သိန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
အခုခရီးစဉ်ကတော့ သမ္မတ ဂျော့ခ်ျ ဒဗလျူ ဘုရ်ှရဲ့ သမ္မတသက်တမ်း ၈ နှစ်အတွင်း
ကိုးကြိမ် မြောက် အာရှခရီးစဉ်ပါ။ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်းနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတို့ဆီ
သွားရောက်မယ့် ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံခရီးကတော့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ တိုက်ရိုက်ကို
မနေ့က သမ္မတအိမ်ဖြူတော်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အမျိုးသား
လုံခြုံရေးကောင်စီ၊ အာရှရေးရာဌာန၊ အကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူး ဒန်းနစ္စ ၀ိုင်လ်ဒါ
(Dennis Wilder) က ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတဘုရ်ှတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ကို သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့
ညနေပိုင်းမှာ ရောက်ပါမယ်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့
အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းတချို့တို့က
ရှင်းလင်းပြောပြတာတွေကို နားထောင်ပါမယ်။ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး
လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး သူတို့ပြောဆိုတာတွေကိုလည်း နားထောင်ပါမယ်။ အဲဒီ
နောက်မှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေက သမ္မတကို တွေ့ဆုံမေးမြန်း
ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီကနေတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကို ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်လို့ မြန်မာ
လူထုကို သူပြောလိုတာတွေ တိုက်ရိုက်ပြောနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဒန်းနစ္စ ၀ိုင်လ်ဒါက ရှင်းပြ
ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ သမ္မတဘုရ်ှဟာ မြန်မာ့အရေးကို
အဓိက ပြောဆိုလုပ်ဆောင်မယ့်ပုံ ရှိနေတဲ့အပေါ် သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကို သိပ်အာရုံ
စိုက်လွန်းပြီး ဒေသတွင်း တခြားကိစ္စတွေပေါ် လုံလောက်တဲ့အာရုံစိုက်မှု မရှိဘူးလို့
ဝေဖန်သူတဦးကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ထင်ရှားတဲ့ ချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်က
ပါမောက္ခ သစ်တီနန် ဖွန်ဆူးဒီရက် (Thitinan Pongsudhirik) ဖြစ်ပါတယ်။
"အရှေ့တောင်အာရှကို ဘုရ်ှအစိုးရက အာရုံစိုက်ပြီဆိုရင် အဲဒါ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စပဲဗျ။
ဒါ့ကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာ ဒီဒေသတွင်းမှာ တကယ့်
ကို အပြည့်အ၀ ဆောင်ရွက်တာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။"
သမ္မတဘုရ်ှက ဘန်ကောက်မှာ သူ့အစီအစဉ်တွေအတိုင်းသွားနေချိန် သမ္မတကတော်
လော်ရာဘုရ်ှက ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ကို သွားရောက်ပါမယ်။ အဲဒီကနေ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ အကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်တဲ့ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းကို
သွားပြီး ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံပါမယ်။ အဲဒီကအပြန်မှာတော့ ဒေါက်တာ
စင်သီယာမောင်ရဲ့ မယ်တော်ဆေးခန်းကို ၀င်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မယ်တော်
ဆေးခန်းဟာ ဒုက္ခသည်တွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားပြီး အလုပ်လုပ်နေကြ
သူတွေ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံထဲကနေ နယ်စပ်ဖြတ်ပြီး ဆေးလာကုကြတဲ့ တခြား
လူနာတွေကို အခမဲ့ဆေးကုသပေးနေတဲ့ ဆေးခန်းပါ။ ဒီဆေးခန်းကို သွားရောက်မှာ
ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်နဲ့ သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရ်ှတို့ တွေ့ဆုံ
ကြမှာဖြစ်သလို ဆေးခန်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်း သမ္မတကတော်အနေနဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အပြီး သမ္မတဘုရ်ှရဲ့ နောက်ခရီးစဉ်ကတော့ အများအပြောများနေကြ
တဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် တရုတ်ခရီးစဉ်ပါပဲ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီခရီးစဉ်ရဲ့ အဓိက
ရည်ရွယ်ချက်က ဘေဂျင်းမှာကျင်းပမယ့် အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲကို
တက်ရောက်ဖို့နဲ့ အားကစားပွဲတချို့ကို ကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်လို့ပါ။ သမ္မတကတော့ သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်
"နိုင်ငံတော်အလံကို ဝှေ့ယမ်းနေတဲ့ သူတို့သမ္မတကို တွေ့ရတာဟာ အပြင်းအထန်
ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ အားကစားသမားတွေ အားတက်ကြမယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။"
ဒါပေမယ့် ဝေဖန်သူတွေရဲ့ အမြင်ကတော့ မစ္စတာဘုရ်ှနဲ့ မတူပါဘူး။ ဒဲရက် မစ်ချဲလ်
(Derek Mitchell) ဟာ မဟာဗျူဟာနဲ့ နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာနကပါ။ သူက
မစ္စတာဘုရှ် အဲဒီလိုပြောတာဟာ သူဖြစ်ချင်တဲ့အတွေးပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။
"သမ္မတက သာမန်လူတယောက်အဖြစ် အားကစားပွဲသွားကြည့်တာမျိုးလောက်
လုပ်လို့မရဘူးလေဗျာ။ အားကစားဖွင့်ပွဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံက အခမ်းအနားဆင်ယင်
နေတာကို သွားကြည့်တဲ့နေရာမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမ္မတဆိုတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်
အဆင့်အတန်းက အပြည့်အ၀ ပါနေတာပါ။"
အိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲကို မတက်ရောက်ဖို့ မစ္စတာဘုရ်ှကို ဖိအားပေး တိုက်တွန်းခဲ့သူတွေက
တော့ တိဘက်အရေး ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ ဆူဒန်နိုင်ငံ၊ ဒါးဖောဒေသအရေးမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့
လုပ်ရပ်တွေကို ထောက်ပြပြီး ဒါတွေဟာ သပိတ်မှောက်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းပြ
ဒါပေမယ့် မစ္စတာဘုရ်ှဟာ တရုတ်သမ္မတ ဟူ ကျင်းတောင် (Hu Jintao) ရဲ့ ဖိတ်ကြား
ချက်ကို လက်ခံခဲ့ပြီးကတည်းက နောက်ပြန်လှည့်လို့ မရတော့ဘူးဆိုပြီး မစ်ချဲလ်က
"သမ္မတက ချက်ချင်းပဲ သူသွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒါကို ပြန်ပြောင်း
မယ်ဆိုရင် တရုတ်ပြည်သူလူထုကို စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စေတာ၊ စော်ကားသလို
ဖြစ်စေတာမျိုး တနည်းနည်းနဲ့ဖြစ်မှာမို့ သူ့အတွက် ပိုပြီး ခက်ခဲပါတယ်။"
အားကစားပွဲကို သူမသွားဘူးဆိုရင် တရုတ်လူထုကို ဗြောင်စော်ကားသလို ဖြစ်လိမ့်
မယ်လို့ သမ္မတဘုရ်ှကလည်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အားကစားသမားတွေကို သူအနေနဲ့ လူကိုယ်တိုင်အားပေးချင်လွန်းလှပါပြီလို့
အမေရိကန် အိုလံပစ်အားကစားအဖွဲ့ကို သမ္မတအိမ်ဖြူတော်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့တုန်းက
"အားကစားပွဲတက်ဖို့ ကျနော် သိပ်တက်ကြွနေတယ်။ ကျနော်တို့အားကစားသမားတွေ
ကို အားပေးချင်လှပြီ၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အောင်ပွဲတွေအပေါ် အပျော်တွေကို ကျနော် မျှဝေ
အမေရိကန်အားကစားသမားတွေဟာ လွတ်လပ်မှုအပေါ် အမေရိကန်ရဲ့ ချစ်ခင်မြတ်နိုး
မှုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လွတ်လပ်မှုရဲ့ သံတမန်တွေအဖြစ် သူမြင်တယ်လို့ သမ္မတဘုရ်ှက
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပေါ် သဘောထား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား တီးခေါက်မေးမြန်း
မြန်မာစစ်အစိုးရ အထူးစုံစမ်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဒီရက်ပိုင်းမှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်
ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်း
တွေကို စုံစမ်းနေသလို ရှေ့ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ သဘောထားတွေကို မေးမြန်းနေပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို
ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ အထူးစုံစမ်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ၁၉၉၀ ခုနှစ်
ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဘယ်မှာနေတယ်၊ သူတို့
ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကအစ အသေးစိတ် မေးမြန်းစုံစမ်းတာတွေ လုပ်နေတယ်
လို့ အန်န်အယ်လ်ဒီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က
ဒါ့အပြင် ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် စစ်အစိုးရက
ရွေးကောက်ပွဲအသစ် ကျင်းပခဲ့လို့ရှိရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်မှာလား ဆိုတာမျိုး၊
တိုက်ရိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် သွယ်ဝိုက်ပြီးမေးတာမျိုးတွေ ရှိနေတယ်လို့ အန်န်အယ်လ်ဒီ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နီးစပ်သူတယောက်က အခုလိုပြောပါတယ်။
"ဘယ်လိုစစ်တမ်းကောက်လဲဆိုတော့ မြို့နယ်တိုင်းမှာ ၉၀ ခုနှစ်က အန်န်အယ်လ်ဒီ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ အရွေးခံတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း အရွေးချယ်ခံထားပြီးသားပေါ့။ အဲဒီလူတွေကို လက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့မြို့နယ်မှာရှိလား၊ မရှိဘူးလား။ ပြီးတော့
ကွယ်လွန်၊ ဒါမှမဟုတ် သက်ရှိ။
"တချို့ကလည်း ရန်ကုန်မှာနေပြီး ဒီမှာလာအရွေးခံတာတွေရှိတယ်။ ရှိရင်လည်း
လောလောဆယ် ဘယ်မှာနေတယ်၊ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပြီးတော့ အဲဒီ
ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ အစိုးရကလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ
မှာ အရွေးချယ်ခံမှာလား၊ မခံဘူးလား။ အရွေးချယ်ခံမယ်၊ မခံဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့
တချို့နယ်တွေမှာ သွယ်ဝိုက်ပြီးစုံစမ်းသလို တချို့နယ်တွေမှာကျတော့လည်း အဲဒီ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တိုက်ရိုက်တွေ့ပြီး မေးတာတွေရှိတယ်။"
စစ်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေက ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်း မကျဘူးဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့
ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့က မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ၂၀၁၀
ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်မယ်ဆိုပြီး
ကြေညာချက် ထုတ်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုကြေညာချက်တွေ၊ ပြောဆိုချက်တွေ
ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အထူးစုံစမ်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ်တွေရဲ့ သဘောထားကို မေးမြန်းစုံစမ်းတာတွေ လုပ်လာခဲ့တာပါ။
တတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ တခြားကျန်နေသေးတဲ့ ၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အရွေးခံခဲ့ရ
တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ သဘောထားကို ဒီလိုမေးမမေးဆိုတာတော့ မသိရ
သေးပါဘူး။ အမေးခံရတဲ့အထဲမှာ ပဲခူးမြို့က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြတ်လှလည်း
ပါဝင်ပါတယ်။ ဦးမြတ်လှက အခုလိုပြောပါတယ်။
"အက်စ်ဘီက တယ်လီဖုန်းနဲ့မေးတာ။ ၀င်မှာလား၊ မ၀င်ဘူးလားတဲ့။ မသိသေးဘူး၊
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေ ထွက်မှပဲ စဉ်းစားမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဝေါက ဦးတင်ရွှေ
တို့ကိုလည်း မေးတယ်လို့ပြောတယ်။ သူတို့ ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲတော့ မသိဘူး။ ကျနော်
သိသမျှ ကျနော့်ကိုမေးပြီးတော့ ဟိုလူတွေ လျှောက်မေးတယ်လို့ပြောတယ်။"
၂၀၁၀ ခုနှစ် မြန်မာစစ်အစိုးရက ကျင်းပပေးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို
သက်တမ်းကြာအောင် ဟန်ပြကျင်းပြတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး ဒီ
ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ဖို့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေကြားမှာ တိုက်တွန်း
စစ်အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကတော့
နိုင်ငံရေးပါတီအသွင်ပြောင်းပြီး ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေ
တယ်ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားသတင်းရပ်ကွက်က သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ သတင်းစာတွေမှာတော့ စစ်အစိုးရ ဦးဆောင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်း
အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို တရားမ၀င်ဘူးဆိုပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရဲ့
ကြေညာချက်တွေကို ဝေဖန်ပြစ်တင်ထားပြီး ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်နဲ့ အလှမ်းဝေးအောင်
မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမျိုးတွေ ရေးသားဖော်ပြနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း လေ့လာသူအဆင့်ရ
ဦးကျော်ကျော်သိန်း တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အချို့။ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၈။
တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းလို့ လူသိများတဲ့ SAARC အဖွဲ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုလေ့လာသူအဆင့်အတန်းနဲ့ လက်ခံဖို့
ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကလာတဲ့ သတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနေ
နဲ့ ကုန်သွယ်ရေးအကျိုးစီးပွား မျှော်ကိုးပြီးလက်ခံခဲ့တာဖြစ်သလို တဖက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကို မျက်ကွယ်ပြု
ထားလို့ မရဘူးလို့ သုံးသပ်တာရှိပါတယ်။အပြည့်အစုံကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
SAARC အဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အပြည့်အ၀ခွင့်ပြုဖို့ မြန်မာနိုင်ငံက ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှာ
တရားဝင်လျှောက်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကနဦးအနေနဲ့ လေ့လာသူအဖြစ် လက်ခံလိုက်
တာပါ။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလမ်ဘိုမြို့တော်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ SAARC အဖွဲ့ လုပ်ငန်း
ကော်မတီရဲ့ ၃၅ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှာ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြေညာခဲ့ပါ
အခုလို လေ့လာသူအဆင့်အတန်း ပေးလိုက်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်
ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့ အခွင့်အလမ်းတခု ပေါ်လာတယ်လို့
သုံးသပ်သူက NCGUB အဝေးရောက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့
က အိန္ဒိယအခြေစိုက် ၀န်ကြီးတဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာတင့်ဆွေပါ။
"မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင် သူတို့နိုင်ငံတွေက သူတို့အကျိုးစီးပွားအရ သူတို့လိုချင်တာ
တွေ တောင်းကြ၊ ပြောကြ၊ လုပ်ကြမှာဖြစ်သလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီ့ပြင် နိုင်ငံတကာ
စင်မြင့်မှာ နိုင်ငံတကာအားလုံးကနေ လက်ညှိုးထိုး၊ ဝေဖန်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်း
ဒီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ အိမ်ရှင် တောင်အာရှနိုင်ငံအသင်းအနေနဲ့လည်း တာဝန်
ရှိတဲ့နိုင်ငံ ပီသလို့ရှိရင်တော့ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ရင် ပြောစရာရှိတာတွေကို
တော့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် ပြောဖို့အတွက် နအဖစစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီအထဲမှာ လေ့လာသူအဖြစ် ၀င်သွားတယ်ဆိုတော့ တနည်းအားဖြင့်
အကောင်းရော၊ အဆိုးရော နှစ်မျိုးစလုံး ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကျနော်တော့မြင်ပါတယ်။"
ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ ASEAN အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ
များအဖွဲ့ပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒုတိယမြောက်ပါဝင်မယ့် အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်ပါ
လေ့လာသူအဆင့်အတန်းဆိုတာ သိပ်ကြီးကျယ်တဲ့အဆင့်တော့ မဟုတ်ဘူး၊ အဖွဲ့ဝင်
ဖြစ်လာဖို့ကတော့ အချိန်ယူရဦးမှာပါလို့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေက ပြောပါတယ်။
တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းကို ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ မူရင်းအဖွဲ့ဝင်
၇ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘူတန်၊ အိန္ဒိယ၊ မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်၊ နီပေါလ်၊ ပါကစ္စတန်၊
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့နဲ့ တရားဝင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေး အခြေအနေတွေ တိုးတက်လာရေး ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကို အဖွဲ့ဝင်သစ်
အဖြစ် လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားလေ့လာသူအဆင့်အတန်းရှိတဲ့ နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံ
ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ တရုတ်၊ အီရန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီး
ယား၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ မော်ရစ်သျှနိုင်ငံတွေပါ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူ
လေ့လာသူအဆင့် သတ်မှတ်မယ့်ထဲမှာ သြစတြေးလျနိုင်ငံလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရက ကိုယ့်ပြည်သူလူထုအပေါ် ပြုမူလုပ်ဆောင်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံ
တကာက ၀ိုင်းဝန်း ပြစ်တင်ဝေဖန်နေချိန်မှာ အခုလို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတခုမှာ
အဆင့်တခုရလာတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးအရ အဆင့်အတန်းတက်လာတယ်လို့ ပြောဖို့
ကတော့ စောလွန်းသေးတယ်လို့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေက ဆိုပါတယ်။
တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဘက်ကလည်း ကုန်သွယ်ရေးတိုးချဲ့ဖို့ရာမှာ အချက်အချာကျတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံကို ခုလို စလက်ခံခဲ့ပေမယ့် မြန်မာ့အရေးမှာ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေလို့တော့ မရ
"သူတို့ရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးအကျိုးစီးပွားကတော့ မြန်မာနိုင်ငံပါလာတဲ့အတွက် အကျိုးတစုံ
တရာ ရမှာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ တချိန်တည်းမှာ ဝေဖန်တဲ့ကိစ္စတွေကို ရေငုံနှုတ်ပိတ်
နေမယ်ဆိုရင်တော့ လေ့လာသူနိုင်ငံတွေကလည်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရှိတယ်၊ နိုင်ငံ
ကြီးတွေလည်း ပါတယ်ဆိုတော့ ဝေဖန်ကြမယ်၊ ထောက်ပြမယ်။ အနည်းဆုံး သူ့နိုင်ငံ
ပြည်သူလူထုနဲ့ အနည်းဆုံး ဒေသတွင်း မီဒီယာတွေက ထောက်ပြခံရမှာကတော့ အမှန်
ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်ခုကို SAARC နိုင်ငံတွေက ချိန်ပြီးတော့ လက်ခံတယ်။ သို့သော်
လည်း သူတို့အကျိုးစီးပွားအရတော့ တစုံတရာ သူတို့အတွက် အကျိုးရှိမှာပါပဲ။"
SAARC အဖွဲ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံ လေ့လာသူအဆင့် ရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ NCGUB တာဝန်
ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေက သုံးသပ်ပြောဆိုသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
AIDS နှင့် အခြားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှု အမေရိကန်က ၄၈ ဘီလံယံ ကူညီမည်
President Bush after signing AIDS legislation, 30 Jul 2008 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၄သောင်းရှစ်ထောင် အသုံးပြုနိုင်ရေး တင်သွင်းထားတဲ့ ဥပဒေကို အမေ ရိကန်သမ္မတ ဘွတ်ရှ် က လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်
ဒီငွေကြေးတွေကို လက်ရှိ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အစီအစဉ်တွေအထဲ သန်းနဲ့ချီအသုံးပြုနေတဲ့ အာဖရိက အရှေ့တောင်အာရှ အပါအ၀င် အချို့နိုင်ငံတွေမှာပါ အသုံးပြုသွားမယ်လို့ ဗီအိုအေသတင်းထောက် မိုက်ကယ် ဘိုးမန်း အိမ်ဖြူတော်က သတင်းပေးပို့ထားတာကို မညိုညိုလွင်က တင်ပြထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေရဲ့ အကြီးမားဆုံး ကြိုး ပမ်းမှုတရပ်အနေနဲ့ သမ္မတရဲ့ အရေးပေါ် စီမံချက် PEPFER လို့ ခေါ်တဲ့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါသည်များ ကူညီ ကုသရေး လုပ်ငန်းစဉ်တရပ်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်က စပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ သန်း ပေါင်း တသောင်းငါးထောင် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်စီမံကိန်းဟာ မကြာမီ ပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လည်း ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ တီဘီရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးတွေ
ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နိုင်ဘို့နဲ့ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဘို့ ဒေါ်လာ ၄၈ ဘီလီယံ အဆိုပြုခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးရာ ပေါ်လစီအရ အာဖရိကနိုင်ငံတွေကို အဓိက ထောက်ပံ့နေပြီး၊ ပက်ဖါး အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ မေတ္တာဂရုဏာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ သမ္မတ ဘွရ်ှက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်ကပဲ HIV/AIDS ဟာ မထိမ်းချုပ်နိုင်အောင် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်၊ အချုပ်အခြာ နယ် မြေတွေ တခုလုံးနီးပါး ပျံ့နှံ့ပြီး ရက်ရက်စက်စက် ဖြစ်ပွားခဲ့မှုတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Botswana လို နိုင်ငံ မျိုးမှာ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါက သက်တမ်း (၁၅) နှစ်လောက်ကို ဖြတ်တောက်ခဲ့တာပါ။ သတင်းစာ တစောင်မှာရေးထားတာက အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဟာ အသက်အရွယ်အလယ်အလတ်ရှိသူတွေကို ဆိုး ဆိုး ၀ါးဝါးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ တကယ့်ကို ကွဲပြားခြားနာမှုတွေကို မြင်တွေ့လာရပါပြီ။ HIV/AIDS ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားတွေအတွက် အကြီးဆုံး စိန်ခေါ်မှုကြီးတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလိုပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဒီစိန်ခေါ်မှုကို ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်နေနိုင်ပါပြီ။”
သမ္မတကနေ ဥပဒေမူကြမ်းကိုလက်မှတ်မထိုးမီ အိမ်ဖြူတော် အရှေ့ဘက်ခန်းမမှာ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ HIV ရောဂါပိုးရှိတဲ့ မိခင်တွေထံက ရောဂါကူးဆက်မှုတွေ နည်းပါးလာပေမဲ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာတော့ ထောင်နဲ့ ချီပြီး HIV ဗိုင်းရက်ပိုးရှိသူတွေကို နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ စစ်တမ်းတွေမှာ တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ဒီလို ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ သတင်းတွေကိုလည်း သမ္မတဘွရ်ှက လက်ခံ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
“HIV ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးရှိနေသူတွေအဖို့ ရှက်နေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး၊ ရှက်မနေပဲ စစ်ဆေး ကုသမှု တွေ ကို လုပ်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ အသက်ဟာ ခင်ဗျားတို့ကို ချစ်ခင်သူတွေရဲ့ ရတနာ တပါး ပါပဲ၊ ဒါဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အမြင်မှာလည်း အဘိုးတန်ပါတယ်။”
ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ကမ္ဘာ့အနှံ့ ရောဂါပျံ့ပွားမှုနှုန်းဟာ တည်ငြိမ်မှုရှိလာပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာလည်း သေဆုံးမှုနှုန်း ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုတွေ ရှိလာနေပြီလို့ ဆိုပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အေအိုင်ဒီအက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဟာ အောင်မြင်မှုရှိနေပေမဲ့ အချိန်မရွေး အလွယ်တကူ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနိုင်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့လဲ သတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်၊
သမ္မတဘွတ်ရ်ှလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ မူကြမ်းက ပက်ဖာ အစီအစဉ်ကို ပိုမိုတိုးချဲလုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
မုံရွာမှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေး အဖြစ်များနေ
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 31 2008 13:18 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့တွင် ကလေးသူငယ်များ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ အဖြစ်များနေသည်။
ကလေးသူငယ်များ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနှင့် ပြင်ပ ဆေးခန်းများတွင် ကလေးငယ် အများအပြား ဆေးကုသ ခံယူနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကလေးတွေကတော့ တော်တော်များများ ဖြစ်နေတယ်။ ဆေးရုံမှာဆို လူတွေတောင် မဆန့်ဘူး။ ကလေးတွေ ကုတင်တောင် မဆန့်ဘူး။ တကုတင်ကို ကလေးနှစ်ယောက်လောက် ထားနေရတယ်။ ကုတင် မဆန့်တော့တဲ့အတွက် လူကြီးအဆောင်တွေမှာ ထားရတယ်။ ကျမ ကလေးတောင် ၃ ရက်လောက် ကုခဲ့ရသေးတယ်” ဟု အုန်းခြံရပ်ကွက်မှာ မိခင်တဦးက ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး “ကျမ ကလေးက သိပ်မပြင်းဘူး။ အသင့်အတင့်ဖြစ်တာ။ လက်မောင်းမှာ အနီပျောက်လေးတွေ ပေါ်လာတယ်။ ဆေးတိုက်လိုက်တော့ သက်သာသွားတာပေါ့။ ဓာတ်ဆားကတော့ အဓိက တိုက်ရတာပေါ့။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါဆိုးတဲ့ ကလေးတွေက နှာခေါင်းထဲမှာ သွေးရှန်တာတွေ ဖြစ်တယ်။ ကျမ အသိထဲမှာ ကလေးငယ် ၁ဝ ယောက်လောက်ရှိတယ်။ လောလောဆယ် ဒီနားမှာတော့ အသားဝါနဲ့ သွေးလွန် တုပ်ကွေး ပေါင်းပြီးတော့ ဖြစ်တယ်။ စလိုင်းတွေကို တပတ်လောက် ချိတ်ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ပြင်ပဆေးခန်းတခုတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားသူ သားငယ်ကို သွားရောက်ကုသနေရသူ ဘုရားကြီးရပ်ကွက်မှ ဒေသခံ တဦးကလည်း “ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်းရဲ့ ကလေးအထူးကု ဆေးခန်းမှာ လာကုတဲ့ ကလေးတွေက တနေ့ကို ၁၅ဝ နီးပါး ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ဆေးခန်းသည် နံနက် ၇ နာရီမှာ ၉ နာရီအထိ တကြိမ်၊ နေ့လယ် ၁၂ နာရီမှ ၂ နာရီအထိ တကြိမ်၊ ညနေ ၄ နာရီမှ ၈ နာရီအထိ တကြိမ်၊ တနေ့လျှင် စုစုပေါင်း ၃ ကြိမ်ဖွင့်ပြီး တကြိမ်တွင် ၅ဝ ခန့် ကုသနေရသည်ဟု မေးမြန်းသိရှိခဲ့ရကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
မုံရွာမြို့ ပြည်သူဆေးရုံကြီးမှ ကလေးဆောင်တွင် တာဝန်ကျသူ ဝန်ထမ်းတဦးကလည်း ကလေးငယ်များ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့် လာရောက် ဆေးကုသ ခံယူနေရကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆိုသော်လည်း အသေးစိတ်ကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် ငြင်းဆိုသည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားမှုသည် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကထက် ယခုနှစ်တွင် ပိုမိုဆိုးရွားကြောင်း ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်းတခုမှ အမည်မဖော်လိုသူ ဆရာဝန်တဦးကလည်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
သူက ဆက်ပြီး “လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်က စဖြစ်တာပါ။ ဆေးရုံနဲ့ ဆေးခန်းတွေမှာ ကလေးတွေ ဆေးကုတာရှိတယ်။ သေဆုံးတာတွေ ရှိတယ်လို့လည်း ကြားရပေမယ့် ဘယ်နှစ်ဦး သေဆုံးတယ်တော့ အတိအကျ မသိဘူးလေ။ လိုအပ်ရင် ဆေးသွင်း၊ သွေးသွင်း လုပ်ပေးရတယ်။ ပြင်ပဆေးခန်းမှာတော့ စိုးရိမ်စရာရှိတဲ့ ကလေးတွေကို ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို လွှဲပြောင်းပေးရတယ်လေ” ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ရုံးထုတ်စဉ် ရုံးအနီး၌ လုံခြုံရေးများ ချထားလာ
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 31 2008 13:22 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးသည့် နေ့များတွင် ရုံးပတ်ဝန်းကျင်၌ လုံခြုံရေးများကို ယခုလအတွင်း ရန်ကုန်၌ ထူးခြားစွာ ချထားလာသည်။
ရာဇဝတ် ပုဒ်မများနှင့် တရားစွဲဆို ခံထားရသည့် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံထားရသူများကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေးရာတွင် တရားရုံး ပတ်ဝန်းကျင် ကိုက် ၅ဝ ခန့်တွင် လုံထိန်း ၁ဝဝ ခန့်ကို အာဏာပိုင်များက လုံခြုံရေး ချထားခြင်း ဖြစ်သည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက် ကတည်းကပါပဲ။ လုံထိန်းတွေပေါ့နော်။ FAW ကား ၂ စီး၊ ၃ စီးပေါ့နော်။ တရားရုံး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ချထားတယ်။ ကားထိုးထားပြီး ကားပေါ် ကားအောက်မှာ ချထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားရုံး အဝင်အထွက် တားတာ ဆီးတာတွေတော့ မရှိဘူး။ တရားရုံးတိုင်းမှာ ရှိတာ။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ အမှုမျိုးတွေ စစ်ဆေးမယ့် ရက်တွေဆိုရင် ချထားတယ်” ဟု ရန်ကုန်က လူငယ်ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယခုလ ၂၉ ရက်နေ့က ဗဟန်းတရားရုံးတွင် သာသနာ့သိပ္ပံမှ သံဃာတော် ၅ ပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၆ ဦး၊ မရမ်းကုန်း တရားရုံးတွင် ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကိုနှင့် ကိုဉာဏ်လင်းအောင်၊ တောင်ဒဂုံတွင်မူ NO ကင်ပိန်းလှုပ်ရှားသူ ဦးတင်ဝင်းနှင့် ကိုညီညီမင်းတို့ ရုံးထုတ်ရာတွင်လည်း ယခုလိုပင် အစောင့်အကြပ်များ ချထားသည်။
ထိုနေ့ကပင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုစည်သူမောင်၏ မိဘများဖြစ်သည့် ဦးပီတာနှင့် ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆွေတို့အား လှိုင်တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးနေချိန် လုံခြုံရေးများ ချထားသည့်အပြင် ပြီးခဲ့သည့်အပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလည်း ငွေကြာယံ ကိုယ်တော် ဦးစာဏီရကို တောင်ဥက္ကလာပ တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးနေစဉ် တရားရုံး ပတ်ဝန်းကျင်၌ လုံခြုံရေး အပြည့်ချထားသည်။
ဗဟိုတရားရုံးချုပ် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်ကလည်း တရားရုံးများအနီး လုံခြုံရေးများ ချထားခြင်းကို ယခုလို ပြောဆိုသည်။
သူက “ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါက အပြင်ရုံးတွေမှာပေါ့နော်။ အန်ကယ်က နိုင်ငံရေးသမားတွေ ထုတ်မှ လုံခြုံရေး ချတယ်လို့ မသိခဲ့ဘူး။လုံခြုံရေးအရ အစီအမံ ရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။ မနေ့က ဉာဏ်လင်းအောင်နဲ့ ကျော်ကိုကိုတို့ ရှိတဲ့ နေ့မှ ချထားတာ တွေ့တယ်လေ။ နေ့တိုင်း လာစောင့်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရုံးနားမှာရှိတဲ့ လူတွေက ပြောတယ်လေ။ FAW ကားပေါ့နော်။ ဒိုင်းတွေနဲ့ လုံထိန်းတွေ ကားပေါ်မှာရော ကားအောက်မှာပါ ရှိတယ်။ ကျန်တာတွေလည်း အရပ်ဝတ်နဲ့ အမှုသည်တွေကြားထဲမှာ ရှိတယ်လို့ အမှုသည်တွေက ပြောပြတာပဲလေ” ဟု ပြောသည်။
ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူက “ဘာဖြစ်လို့ ချထားတယ် ဆိုတာက ဒီကာလက အရေးကြီးလို့ သူတို့အနေနဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူရတယ်လို့ပဲ ပြောတယ်လေ။ လုံထိန်းတွေကို အများကြီး ချထားတဲ့အတွက် ဒီလို အများသူငှာ ကြားနာခွင့်ရှိတဲ့၊ လာရောက် ကြည့်ရှုခွင့်ရှိတဲ့ တရားရုံးမှာ အများပြည်သူတွေ အနေနဲ့ အများကြီး ဟန့်သွားတာပေါ့။ မလာရဲတာတို့ ရှိသွားတာပေါ့။ ပြောတာဆိုတာ၊ တားတာတွေတော့ မရှိဘူး” ဟု ပြောသည်။
ထို့အပြင် အင်းစိန်ထောင်တွင်းရှိ အထူးရုံးတွင် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးသည့်အခါ မိသားစုများ လာရောက် ကြည့်ရှုခွင့် မရှိကြောင်းနှင့် ထမင်းစားချိန်နှင့် အမှုစစ်ဆေးချိန်များတွင် လက်ထိပ် ဖြုတ်မပေးခြင်းကြောင့် လူဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ညီညွတ်စွာ အမှုရင်ဆိုင်ခွင့်ကို ဆုံးရှုံးစေရသည်ဟု ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူက ပြောဆိုသည်။
သူက ဆက်ပြီး “ကျနော်က တရားရုံးမှာ အမှုစစ်ဆေးနေတဲ့ အချိန်မှာ လက်ထိပ်ဖြုတ်ပေးဖို့၊ ဒီလို လက်ထိပ် ဖြုတ်ပေးခြင်းဖြင့် လူတယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သူ့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုလည်းပဲ အများကြီး တန်ဖိုးထား လေးစားရာ ရောက်တယ်၊ ဒီလို ဖြစ်စေနိုင်ဖို့အတွက် စစ်ဆေးနေဆဲ ကာလမှာ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီ လက်ထိပ် ဖြုတ်ထားပေးပါလို့ တရားရုံးကို လျှောက်ထားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
သို့သော် လှိုင်မြို့နယ် တရားသူကြီး ဒေါ်အေးမြိုင်နှင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ် တရားသူကြီးများက အဆိုပါ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတိအကျ လိုက်နာနေသော်လည်း ရန်ကင်း၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ တောင်ဒဂုံ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ဒေါပုံ တရားရုံးများတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း လုံးဝ မရှိသည့်အပြင် ရဲများက ရဲဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ခြင်း မရှိဘဲ သက်သေခံခြင်းကိုပါ လက်ခံ စစ်ဆေးနေကြောင်း သူက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် တရားသူကြီးက လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း ဖြန့်ဝေမှုကြောင့် အကျဉ်းချခံနေရသည့် ထွန်းမြင့်အောင်နှင့် စန်းလွင်ဦးတို့ အမှု စစ်ဆေးနေချိန်တွင် ရဲအုပ်က သေနတ်နှင့် ကျည်ကပ် ကိုင်ဆောင်လာပြီး တရားခွင်တွင် စစ်ဆေးခံခြင်းမျိုးများ ရှိခဲ့ကာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် တခုတည်းရှိသော်လည်း ကျင့်သုံးသည့် တရားရုံး၊ မကျင့်သုံးသည့် တရားရုံးများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
မုဒုံမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲ၊ အသေအပျောက် မရှိ
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 31 2008 18:58 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့နယ်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးရုံး၌ ယမန်နေ့ညက ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း လူအသေအပျောက် မရှိဟု ဒေသခံများ အပြောအရ သိရသည်။
မုဒုံမြို့နယ် တောင်ဘက် ၂ မိုင်အကွာ ကြုံဖမ်းရွာရှိ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးစခန်း ရုံးလှေခါးအောက်တွင် ယမန်နေ့ ည ၁၁ နာရီခွဲခန့်က ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ယမ်းများနှင့် လက်နက်များလည်း သိမ်းဆည်း ရမိသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောပြကြသည်။
“ကြုံဖမ်းရွာမှာ ပေါက်တာ။ လူအသေအပျောက် မရှိဘူး။ မိတဲ့ပစ္စည်းက အန်တီတီ ယမ်းအမျိုးအစား လေးလုံး။ နောက် ယမ်းအပျော့ ၁ဝ ထုပ်။ လက်နက်တွေလည်း ဖမ်းမိတယ်။ အဆောက်အဦက အရမ်းကြီး မပျက်စီးသွားဘူး။ အနည်းငယ် ပျက်စီးသွားတယ်” ဟု အမည်မဖော်လိုသူ လူငယ်တဦးက မဇ္ဈိမကို တယ်လီဖုံးမှတဆင့် ပြောပြသည်။
ယခုလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတိယအကြိမ် ဗုံးပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်သည်။
ဇူလိုင် ၁၄ ရက်နေ့က ပဲခူးတိုင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ်အတွင်း၌ ကျောက်ကြီး-ရန်ကုန် ရွှေခရီး ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲရာ ခရီးသည်တဦး သေဆုံးခဲ့သေးသည်။
ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုံး ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း ရုံးခန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ရွှေပြည်သာ ပေါက်ကွဲမှုကိုတော့ မြေအောက်လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များ အဖွဲ့ကတော့ သူတို့ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည်။
မောင်ဝိတ်ကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အမှုတိုးတပ်ပြန်
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 31 2008 20:34 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် မောင်ဝိတ်ကို နောက်ထပ် အမှုတခု တိုးလိုက်ပြန်သည်။ မလေးရှား နိုင်ငံသားတဦးကို သူ၏ ရုံးခန်းအတွင်း တရားမ၀င် နေထိုင်ခွင့် ပြုထားသည် ဆိုကာ မောင်ဝိတ်ကို လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ ပုဒ်မတခုဖြင့် ထပ်မံ စွဲဆိုထားသည်။
လမ်းမတော်မြို့နယ် ရဲစခန်းက ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အမှုဖွင့် စွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရဲအရာရှိ တဦးက ပြောသည်။ လူဝင်မှုဥပဒေ ၁၃ (၅) အောက်မှ အမှုတွဲအမှတ် (ပ) ၁၈၇-၀၈ ဖြစ်သည်။
အာဏာပိုင်တွေကို အကြောင်းမကြားဘဲ မလေးရှား တယောက်ကို လက်ခံထားတယ်လို့ သံသယ ရှိနေတယ်" ဟု ရဲသတင်း ရပ်ကွက်က ပြောသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသား မစ္စတာ ပီတာတူးဟောက်ဟော Mr. Peter Too Haut Haw ကို မောင်ဝိတ် အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံသား ၅ ဦးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အက်စ်တစီ၊ မက်တာဖီတမင်းနှင့် ကီတမင်းဆေးပြားများ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုဖြင့် အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် မောင်ဝိတ်နှင့်မိသားစု ကုမ္ပဏီလိမိတက် မန်းနေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ ကိုမောင်ဝိတ်ကို ရဲက စွဲဆိုထားပြီး အမှုထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် တသက်အထိ ကျခံရနိုင်သည်။
အမှုဖွင့်ဆိုထားသော ရဲစခန်း သတင်းရပ်ကွက် အဆိုအရ မလေးရှားနိုင်ငံသားသည် ရန်ကုန်တိုင်း လမ်းမတော်မြို့နယ် ရပ်ကွက် ၁ ၊ အနော်ရထာလမ်းပေါ်ရှိ မောင်ဝိတ်နှင့် မိသားစုကုမ္ပဏီ လိမိတက်ရုံးချုပ် ပရ၀ုဏ်အတွင်း ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက နေထိုင်လျက် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
မဇ္ဈိမ ဝဘ်ဆိုဒ် တိုက်ခိုက်ခံနေရ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 30 2008 13:50 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ နယူးဒေလီ အခြေစိုက် မဇ္ဈိမသတင်းဌာန၏ မြန်မာဘာသာ ဝဘ်ဆိုဒ် www.mizzimaburmese.com သည် ပြင်းထန်စွာ ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီး တင်္နလာနေ့မှစ၍ ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍ မရတော့ပါ။ ယင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် နည်းပညာ အခေါ်အရ (Distributed Denial of Services – DDoS) attack ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မဇ္ဈိမဝဘ်ဆိုဒ်၏ မြန်မာဆာဗာသည် ၎င်းလက်ခံနိုင်သည့် ပမာဏထက် ကျော်လွန်သည့် ဒေတာများဖြင့် တိုက်ခံရပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ရပ်ဆိုင်းသွားရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤတိုက်ခိုက်နည်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ကြည့်ရှု၍မရအောင် ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်သည်ဟု မဇ္ဈိမ၏ ဝဘ်မာစတာက ပြောဆိုသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို တပြိုင်တည်း အလွန်အကျွံ စုပြုံ၍ ပေးပို့လိုက်ခြင်းကြောင့် ဝဘ်ဆိုဒ်က လက်ခံနိုင်သည့် ပမာဏထက် ကျော်လွန်သွားစေကာ အချက်အလက်များကို ပြန်လည် မပေးပို့နိုင်ပဲ ရပ်ဆိုင်းသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်ဆေးလေ့လာချက်များအရ သတင်းအချက်အလက်များမှာ ၁၅ မိနစ်အတွင်း ၅ ဂျီဂါဘိုက် (၅ Gigabytes) ခန့်အထိ ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ဤပမာဏသည် သာမန် လက်ခံနေရသည့် ပမာဏထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုနေသည့်အတွက် ဤသို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘဲ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာဆာဗာကို ကူညီထိန်သိမ်း ကြည့်ရှုပေးသူ မဇ္ဈိမ၏ မိတ်ဆွေ နည်းပညာရှင်တဦးက ပြောဆိုသည်။
ဤသို့ တိုက်ခိုက်မှုမျိုး၏ မူရင်းကို ခြေရာခံ သိရှိနိုင်ရန် ခက်ခဲပြီး ဤတိုက်ခိုက်မှုသည် မဇ္ဈိမ မြန်မာဝဘ်ဆိုဒ်ကို အဓိက ချိန်ရွယ် တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ဤသို့သော တိုက်ခိုက်မှုသည် လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပေါင်း အတော်ကြာကတည်းက ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိ နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်၊ ရုရှ၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတို့မှ ဆာဗာများကို အသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။ မဇ္ဈိမ မြန်မာဘာသာ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို တိုက်ခိုက်ခြင်းတွင် အနည်းဆုံး ဆာဗာ ၃ဝ ကို ပါဝင်ပတ်သက် အသုံးပြုထားသည်ဟု သူက ပြောသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်စပ် ပတ်သက်သည့် သတင်းများ၊ အမြင်များကို စုစည်း တင်ဆက်ပေးနေသည့် လွတ်လပ်သော မြန်မာ မာလ်တီမီဒီယာ သတင်းဌာနတခုဖြစ်ပြီး ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာဂျာနယ်လစ်များက ဦးစီး လုပ်ကိုင်နေသည့် သတင်းဌာနတခု ဖြစ်သည်။ အဓိက ဝဘ်ဆိုဒ် ၄ ခုဖြစ်သည့် (mizzima.com, mizzimaburmese.com, mizzima.tv, mizzimaphoto.com) တို့မှ သတင်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများကို နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးနေသည်။
သတင်းများကို မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာတို့ဖြင့် နေ့စဉ် တင်ဆက် ပေးနေသည့်အပြင် ဤသတင်း ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဗီဒီယို သတင်းများကိုလည်း မဇ္ဈိမတီဗီ ဝဘ်ဆိုဒ် (mizzima.tv) တွင် တင်ဆက်ပေးလျက် ရှိသည်။ ဤဝဘ်ဆိုဒ်မှ သတင်းများကို အခြားသတင်းဌာနများကလည်း မကြာခဏ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု အသုံးပြုလေ့ ရှိသည်။
မဇ္ဈိမ မြန်မာဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဝဘ်ဆိုဒ်များကို နေ့စဉ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် Unique Visitors ပျှမ်းမျှ တသောင်းမှ သောင်းငါးထောင်အထိ ရှိပြီး ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆန္ဒပြပွဲများ အတွင်း နှင့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုံး ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်အပြီးနှင့် ယခုနှစ်မေလနှင့် ဇွန်လတို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ အရေအတွက်မှာ နှစ်ဆကျော်ခန့် ထိုးတက်သွားခဲ့သည်။
ဤတိုက်ခိုက်မှု၏ နောက်ကွယ်တွင် မည်သူ ရှိနေမည် ဆိုသည်ကို သိရှိရှာဖွေရန်မှာ ခက်ခဲသော်လည်း ဤဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုများသည် တရုတ်၊ ရုရှ၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံများရှိ ဆာဗာများကို အသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းနိုင်ငံများတွင် အတတ်ပညာရှင်နှင့် အင်ဂျင်နီယာ အများအပြားကို ပညာသင်ရန် စေလွှတ်ထားသည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ လူများလက်ချက် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းရသည်။
မဇ္ဈိမဝဘ်ဆိုဒ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိတ်ပင်ထား၍ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ကြည့်ရှုလိုပါက မြန်မာအာဏာပိုင်များ မသိအောင် ဘရောက်ဇီ ဆာဗာများခံ၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရပြီး သိသွားပါက ဒဏ်ငွေ အမြောက်အမြား ပေးရနိုင်သည်။
ဤသို့ တိုက်ခိုက်မှုတွင် မဇ္ဈိမ ဝဘ်ဆိုဒ်သာမက နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလို အခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) ၏ ဝဘ်ဆိုဒ် www.dvb.no သည်လည်း ဇူလိုင်လ ၂ဝ ရက်နေ့ကတည်းက ဤသို့ ပြင်းထန်သည့် တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကို ခံနေရကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော ၄ ရက်အတွင်း ပိုမိုပြင်းထန်၍ ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက် ခံခဲ့ရသည့်အတွက် တိုက်ခိုက်သူသည် (DVB) ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ရပ်ဆိုင်းသွားစေရန် ကြိုးပန်းနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း DVB ၏ ဒုတိယအမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်း က သောကြာနေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“အခုထိ တိုက်ခိုက်ခံနေရဆဲပါပဲ” ဟု ဦးခင်မောင်ဝင်း က ပြောကြားသည်။
“နည်းပညာအရ တိုက်ခိုက်မှု၏ နောက်ကွယ်တွင် မည်သူရှိသည် ဆိုသည်ကို ပြောဆိုရန်မှာ ခက်ခဲသည်။ သို့သော် ဤတိုက်ခိုက်မှု၏ နောက်ကွယ်တွင် မြန်မာအစိုးရ ရှိကြောင်း အလွယ်တကူ ပြောနိုင်သည်” ဟု ဦးခင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
ငပုတောက လယ်ယာများ ဂဏန်းကိုက်၍ ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 30 2008 14:26 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မုန်တိုင်းသင့် ဧရာဝတီတိုင်း ငပုတောမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများတွင် စပါးခင်းများကို လယ်ပုဇွန် ဂဏန်းများ ကိုက်ဖြတ်နေသဖြင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားနေသည်။
ငပုတောမြို့နယ် သင်္ဃန်းကုန်း၊ သညင်မူ၊ ဇီးဖြူဆိပ်၊ ငကုန်း၊ ကုန်းတန်းပုတ္တ၊ ခွေးချောင်း၊ ကိုးထောင် အစရှိသည့် ကျေးရွာများ အပါအဝင် ကျေးရွာအများစုတွင် စိုက်ပျိုးထားသည့် စပါးပင်များကို လယ်ပုဇွန် ဂဏန်းများက ကိုက်ဖြတ်သဖြင့် အပျက်အစီး ကြီးမားနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“မနှစ်ကဆို ဗမာလို ဝါဆိုလပြည့် ဇူလိုင်လလယ်ပေါ့နော်။ ဒီအချိန်မှာ အဲဒီပိုးက အကုန်ဆင်းတယ်ပေါ့နော်။ အခု မိုးကလည်း မရွာဆိုတော့ ပိုးက မဆင်းတတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်လောက်က စပြီး မိုးမရွာတော့ မဆင်းဘူး။ အပင်ရှည်၊ အပင်တို ကိုက်တယ်။ အခုဆို အပင်တောင် မပေါက်တာ။ ပြတ်သွားပြီဆိုရင် စပါးပင်က သေတာပဲ” ဟု ငပုတောမြို့နယ်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှ စိုက်ပျိုးရေးအရာရှိ တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သင်္ဃန်းကုန်းရွာ လယ်သမားတဦးက “စပါးပင် နည်းနည်း ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာ ဂဏန်းက ကိုက်လို့မရဘူး။ အခု လုပ်ငန်းခွင် နောက်ကျတာရယ်၊ မျိုးစပါးမပေါက်တဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ပေါ့နော်၊ စပါးပင်ကို ဂဏန်းက ကိုက်တာ။ ရွာတွေ အများကြီးပဲ။ မျိုးစပါး မအောင်မြင်မှုက ပိုပြီး ကြီးမားပါတယ်။ ဒီပိုးတွေ မဆင်းတာက အမှန်တော့ ရေလျှော့၊ ထုတ်ဖို့ မရှိလို့ ဖြစ်တယ်။ မိုးရွာလည်း နည်းလို့ပေါ့။ ဆားငန်ရေတွေ ဝင်ခဲ့လို့ ပိုဆိုးတာ” ဟု ပြောသည်။
မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းကပင် ထိုဒေသသို့ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ လှူခဲ့သူတဦးကလည်း ယခုသတင်း ဟုတ်မှန်ကြောင်းနှင့် ရွာပေါင်း ၇ဝ ခန့်တွင် အဆိုပါ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ယခုလို ပြောသည်။
“လယ်သမားတွေက မျိုးစပါးမပေါက်တာရော ပေါက်တဲ့ စပါးတွေကလည်း ဂဏန်းကိုက်တယ်။ လယ်သမားတွေ ငြီးနေတယ်။ မျိုးစပါး မပေါက်တော့ အခုမှ ပြန်ကျဲရင်လည်း နောက်ကျပြီ်။ ပေါက်တာကလည်း ဂဏန်းကိုက်လို့ လယ်ယာအများ ဆုံးရှုံးရပါတယ်။ လယ်သမားတွေ ငြီးတွားသံတွေကို ကျနော် သိရတာ ရွာပေါင်း ၇ဝ လောက် ရှိမယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
အလားတူပင် ကော့မှူးမြို့နယ်ရှိ မြစန္ဒီကျေးရွာတွင်လည်း မျိုးစပါး မအောင်သလို၊ ဂဏန်းများ ကိုက်နေကြောင်း မြစန္ဒီကျေးရွာ လယ်သမားဦးက ယခုလို ပြောသည်။
သူက “ဒီမှာလည်း သူတို့ မျိုးစပါးက ကျဲလို့မှ မရတာ။ ပေါက်ကို မပေါက်တာ။ စပါးအဖျားတွေ ခြောက်ပြီးတော့ နီလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က ဂဏန်းမကြီးခင် စပါးကို ကျဲပစ်လိုက်တယ်။ ဂဏန်း နည်းနည်းကြီးသွားတော့ စပါးက စိုက်လို့ မရဘူး။ သူက စပါးပေါက်ခါစဆိုရင် စပါးပင်ကို လိုက်လိုက် ကိုက်ဖြတ်တာ။ အဲဒီဂဏန်း တကောင်ပေါက်ရင် အကောင် ၅ဝဝ လောက် ပြန်ပေါက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် သူက ဖျက်ဆီးတာ သိပ်မြန်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ဂဏန်းမှာ ထမင်းလုံးဟု ဒေသတွင်း၌ ခေါ်ဆိုသည့် ပိုးကောင်တမျိုးမှ ပေါက်ဖွားလာပြီး ချောင်းဂဏန်း၊ လယ်ပုဇွန်လုံးဂဏန်းနှင့် ဖောင်စီးဂဏန်း စသည့် ဂဏန်းမျိုးများ ရှိကြောင်း သိရသည်။
ငပုတောဒေသတွင်း၌ မျိုးစပါး အောင်မြင်မှု မရှိသလို၊ ဂဏန်းပိုးကောင်များ ဖျက်ဆီးမှုအပြင် ဓာတ်မြေသြဇာ လိုအပ်ချက်လည်းကြီးမားနေသဖြင့် လှူဒန်းပံ့ပိုးပေးမည့် အကူအညီများ လိုအပ်နေကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး ပညာရှင်က ယခုလို ပြောဆိုခဲ့သည်။
“မြေသြဇာလည်း လယ်သမားများက မဝယ်နိုင်ဘူး။ မြေကြီးမှာ အပုတ်နံ့ထွက်တာကို ကာကွယ်ရအောင်ပေါ့။ စိုက်ထားတဲ့ အပင်လေးတွေက မြေသြဇာ မစားရတဲ့အခါ ဝဝတုတ်တုတ် အားရှိတဲ့ အပင်လေးမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် စပါးထွက်ရှိမှု တော်တော်လေး စိုးရိမ်ရတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ့် လူတွေရှိရင် တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်၊ ကောင်းတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီမှာက ပံ့ပိုးမယ့်သူ တဦးမှ မရှိသေးဘူးလေ။ ကျနော်တို့ ဗမာလူထုက ကျေးဇူးတင်မှာပါ” ဟု သူက ပြောသည်။
Eye-witnesses from Depayin miscared - Ko Min Thein
Eye-witnesses from Depayin miscared - khin zaw
Eye-witnesses from Depayin miscared - Ko Naing
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/30/20080အကြံပြုခြင်း
မုန်တိုင်းဒုက္ခသည် မိဘမဲ့ကလေးများကို မန္တလေး ဘုန်းတော်ကြီးများက စောင့်ရှောက်ထား
ကိုစိုး | ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၈
နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်သင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသမှ မိဘမဲ့ ကလေးများကို မန္တလေးမြို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း ၂ ကျောင်းက ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားကြောင်း ဘုန်းတော်ကြီးများက ပြောသည်။
လပွတ္တာမြို့နှင့် ဘိုကလေး မြို့နယ်များမှ အသက် ၆ နှစ်မှ ၁၂ နှစ် အထိ ရှိသော မိဘမစုံသော ကလေးများ အပါအ၀င် မိဘမဲ့ကလေးများကို ခေါ်ယူစောင့်ရှောက် ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့သစ် ကန်တက်ကုန်း မစိုးရိမ် ကျောင်းတိုက် မှ ဆရာတော် ဦးတေဇောဘာသ က ပြောသည်။
“အခုက ပြန်သွားတာနဲ့ဆိုတော့ ၉ ဦး လောက်ပဲ ရှိတယ်၊ အားလုံး က ၁၂ ဦး ၊ လပွတ္တာနဲ့ ဘိုကလေး ဘက် ကနေ မစိုးရိမ် တိုက်သစ် နာယက ဆရာတော်တွေက ခေါ်လာတာ၊ မိဘ မရှိတာရော၊ မိဘ မစုံတာရော ၊ စုံတာ ရောပဲ၊ တချို့ကလေး တွေက မိဘရှိပြီး ဆင်းရဲလို့ ခေါ်လာတာ၊ စားရေး နေရေး နဲ့ အဓိက က ပညာရေး အတွက် ပေါ့၊ မိဘ ရှိတဲ့ ကလေးတွေ ကတော့ တချိန် မိဘတွေ ဆီ ပြန်ပို့ပေးရမှာပါ၊ ပညာသင်ကြားပေးပြီး ပြန်ပို့ပေးဖို့ ဘုန်းကြီး က ရည်ရွယ်ထားပါတယ်၊ တချို့ကလေးတွေက သိပ်တော့ မပျော်ဘူး၊ ဒေသ ခွဲလာရတာရယ်၊ အပေါင်း အသင်း သူငယ်ချင်းမရှိတာရယ်၊ စာသင်ရ တာလည်းပါတယ်”ဟု ဆရာတော် ဦးတေဇောဘာသ က ပြောပြသည်။
ရောက်ရှိလာသော ကလေးများထဲတွင် မိန်းကလေး ၂ ဦး ပါဝင် ပြီး အသက် ၆ နှစ် နှင့် ၈ နှစ် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယောက်ျား လေး ၆ ဦးကို သင်္ကန်းစည်းပေးထားကြောင်း၊ ၎င်းတို့အား အတန်းပညာ အဓိက သင်ပေးကြောင်းနှင့် ဘာသာရေးစာပေ ကိုလည်း တ ရက် တနာရီခန့် သင်ကြားပေးကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကလေးများအတွက် စရိတ်ကို သီးသန့်အလှူခံခြင်းမရှိဘဲ ကျောင်းတိုက်မှ ရရှိလာသည့် လာဘ်လာဘထဲ မှပင် သုံးစွဲရသည့်အတွက် ပေါပေါများများ မသုံးစွဲနိုင်ဟုလည်း ဦးတေဇောဘာသ က ပြောဆိုသည်။
ဆရာတော် ဦးတေဇောဘာသ ဦးဆောင်တည်ထောင်ထားသော ယင်း ကန်တက်ကုန်း မစိုးရိမ် ကျောင်းတိုက်သည် သက်တမ်း ၁၅ နှစ်ခန့်ရှိပြီး ယခင်ကပင် ပထမ ငယ်၊ ပထမ လတ်၊ ပထမကြီး နှင့် ဓမ္မာစရိယ အတန်းများ ကို သင်ကြား သော ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်နှင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင် မူလတန်းလွန် စာသင်ကျောင်းလည်း ဖွင့်လှစ် ထားသောကြောင့် တချို့ဆွမ်းကွမ်းနှင့် စာအုပ်စာတန်းများကို လှူဒါန်း ထောက်ပံ့မှုများ ရှိကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ မန္တလေးမြို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်း တကျောင်းကလည်း လပွတ္တာ၊ ဘိုကလေးနှင့် မော်လမြိုင် ကျွန်း မြို့နယ်များမှ မိဘမဲ့ ကလေး ၃၀ ခန့်ကို ခေါ်ယူ စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း ထိုကျောင်းမှ တာဝန် ခံ ဆရာတော် တပါးက ပြောဆိုသည်။
“ဇွန်လ ၂၈ ရက် လောက်ကတည်းက စခေါ်လာပြီး စောင့်ရှောက်ထားတာပါ၊ တော်တော်များများက သူတို့ သား ချင်းတွေ ကိုယ်တိုင် အပ်ကြတာပါ၊ ရာခိုင်နှုန်းအများစုက မိဘမဲ့၊ တချို့ကတော့ မိဘမစုံတော့တဲ့သူတွေ၊ နောက် ထပ် ၁၀ ဦး လောက်လည်း ရောက်ဖို့ရှိသေးတယ်၊ အခု ရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေက အသက် ၅ နှစ် လောက် ကနေ တချို့ ၁၆ နှစ် လောက်အထိပါတယ်၊ စားရေးနေရေး၊ ၀တ်ရေး၊ ပညာရေးရော ကျန်းမာရေးပါ၊ အကုန် စောင့်ရှောက်ထားတာ၊ စရိတ် ကတော့ တော်တော်လေး ရှာရပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အဆိုပါဒုက္ခသည် ကလေးများကို မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတကျောင်းမှ တဆင့် ပို့ဆောင် ပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ကလေးများကို သင်ကြားစောင့်ရှောက်ရန် သင်တန်းဆင်း ဆရာမ ၂ ဦးကို ထားရှိ၍ ကျန်းမာရေး အတွက်လည်း ကျောင်းဝန်းအတွင်းပင် ဆေးခန်းနှင့် စနစ်တကျ စီစဉ်ထားသည်ဟုလည်း သိရသည်။
ယခု ဒုက္ခသည်ကလေးများကို စောင့်ရှောက်ထားသော ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းသည် ယခင်ကပင် မိမဲ့ ကလေး ၇၅ ဦး ခန့်နှင့် ရှမ်း၊ ၀ ၊ ပလောင်၊ အခါ ၊ ကရင် စသည့် တိုင်းရင်းသားကလေးငယ် ၁၀၀ ခန့်ကိုလည်း စောင့်ရှောက် ထားသည့် ပရဟိတ ကျောင်းတကျောင်းအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာကို အသိပေးဆောင်ရွက် ထားခြင်းဖြစ် ကြောင်း အထက်ပါ ဆရာတော်က ပြောဆိုသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် မိဘမဲ့ ကလေးများ အတွက် စစ်အစိုးရ အမျိုးသား သဘာဝဘေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဗဟို ကော်မတီက လပွတ္တာနှင့် ဖျာပုံတို့တွင် မိဘမဲ့ကလေး သင်တန်းကျောင်းများကို ဖွင့်လှစ်ပေးကြောင်း အစိုးရ သတင်းစာများ တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ရှားပါးတိရစ္ဆာန်များ အထူးဟင်းလျာအဖြစ် ရန်ကုန်တွင် ခေတ်စား
ကြည်ဝေ/ရန်ကုန် | ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၈
သောကြာနေ့ဆိုလျင် ရန်ကုန်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ထဲက တရုတ်စားသောက်ဆိုင်ကလေးမှာ တခြားနေ့များထက် ပိုပြီး စည်ကားနေတတ်သည်။
ဆိုင်ထဲရှိ သာမန်စားပွဲများတွင် လူအနည်းငယ်ခန့်သာ ရှိသော်လည်း အထူးခန်းဟု ခေါ်သော စားသောက်ဆိုင်၏ အတွင်း ဘက် လေအေးပေးစက်တပ်ထားသည့် အခန်းငယ်လေး များတွင်တော့ အထူးဟင်းလျာနံ့များနှင့် ထုံမွှန်းပြည့်ကြပ်နေ တော့သည်။
ထိုဆိုင်ကလေးမှာ သောကြာနေ့ ဆိုလျင် ဆိုင်၏ မီးနူးစာအုပ်ထဲတွင် တွေ့ရလေ့မရှိသော အထူးဟင်းလျာများ ရရှိတတ် သည်။ မျောက်သား၊ မြွေသား၊ တောကြောင်သား၊ ဂျီသား၊ ဆတ်သား၊ လိပ်သား၊ ပင်လယ်ရေခူ၊ ငါးမန်းတောင်ဟင်းချို၊ ပင်လယ်မျှော့သုတ် စသည့် ဟင်းလျာများ ဖြစ်သည်။ မီနူးစာအုပ်ထဲတွင် ထည့်သွင်း ထားခြင်းမရှိသော အဆိုပါ အထူး ဟင်းလျာများအကြောင်း လူတိုင်းမသိနိုင်သော်လည်း ဖောက်သည်များ ကတော့ သိသည်။ သောကြာနေ့တိုင်း အထူး သီးသန့်ခန်းများတွင် ဖောက်သည်များနှင့် ပြည့်နေတတ်၏။
ယခုတပတ်အတွက် အထူးဟင်းလျာများမှာ မျောက်သားချက်နှင့် ငါးမန်းတောင်ဟင်းချို ဖြစ်သည်။ မျောက်သား မစားရဲ သူများအတွက် ချေသားချက်ကိုလည်း စီမံပေးထားသည်။
အတုံးလေးတွေတုံးကာ ကြော်ထားသော မျောက်သားကို တူဖြင့်ကော်ကာ စားနေကြသူများမှာ ဆိုင်မျက်နှာစာ ရှေ့နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲထားသည့် ဥပဒေအရ ကန့်သတ်ထားသော သားရဲ တိရစ္ဆာန်များ၏ အသားကို ၀ယ်ယူ ရောင်းချခြင်းမပြု ဟူသော စာတမ်းကို ဖတ်ရှုခဲ့ဖူးသူများသာ ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ စားသောက်ဆိုင်တချို့တွင် သစ်တောဥပဒေမှ ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားသော သားငှက်တိရစ္ဆာန်များကို အထူး ဟင်းလျာများအဖြစ် ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
ရှားပါးမျိုးစိတ်များဖြစ်ကြသော တောဝက်၊ တောကြောင်၊ မျောက်၊ ၀က်ဝံ၊ မြွေအမျိုးမျိုး၊ ရေသတ္တ၀ါထဲမှ ငါးမန်း၊ လိပ်၊ ပင်လယ်မျှော့ စသည့် သတ္တ၀ါများကို စားသုံးနေကြခြင်းမှာ ၎င်းတိရိစ္ဆာန်များ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ် စေခြင်း၏ အကြောင်း ရင်း တရပ်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသားငှက်တိရိစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
“ပုပ္ပားတောင်ပေါ်က မျောက်တွေဆိုရင် အရင်တုန်းက အုပ်စုလိုက်ကို အများကြီးတွေ့ရတာ အခု တော်တော့်ကို နည်းသွား ပြီ။ ပုပ္ပားကလူတွေကို မေးကြည့်တော့ မျောက်ပစ်တဲ့ သူတွေကြောင့်လို့ ဖြေကြတယ်” ဟု အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
အဆိုပါဒေသမှ မျောက်ပစ်သူများသည် မျောက်သားစားချင်သောကြောင့် ပစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မျောက်တကောင် ကျပ် ၅ ထောင်မှ ကျပ် ၂ သောင်းထိ ဈေးပေးဝယ်သူများ ရှိသည့်အတွက် ရောင်းစားရန် ပစ်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မျောက်သားနှင့် မျောက်သွေးမှာ ဈေးကွက်ဝင်လျက်ရှိသကဲ့သို့ မျောက်အကောင်လိုက် ရောင်းချခြင်းမှာလည်း ခေတ်စား လျက်ရှိကြောင်း ပုပ္ပားတောင် ဘေးမဲ့ဥယျာဉ်မှ တောခေါင်း တဦးက ပြောပြသည်။
စားသောက်ဆိုင်များတွင် နာမည်ကြီးလှသော ငါးမန်းတောင်ဟင်းချိုကြောင့် မြန်မာ့ ပင်လယ် ပြင်မှ ငါးမန်း မျိုးစိတ်တချို့ ပျောက်ကွယ်မျိုးသုဉ်းသွားရကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဋ္ဌာနမှ မြို့နယ် ဦးစီးမှူး တဦးက ပြောသည်။
“ငါးမန်းဈေးကွက် ကြီးလာတော့ ငါးမန်းကိုပဲ လိုက်ရှာဖမ်းတဲ့သူတွေ များလာတယ်။ ရခိုင်က လူတွေဆိုရင် လင်းရှူးသားကို ငါးမန်းစာအဖြစ် ငါးမျှားချိတ်မှာ တပ်ဖမ်းတော့ ငါးမန်းရော လင်းချူးတွေပါ ပျောက်ကုန် တော့တာပဲ” ဟု အဆိုပါ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးက ဆိုသည်။
ငါးမန်းဖမ်းသည့် လင်းရှူးငါးများသည် ရှားပါးစားရင်းဝင် ငါးမျိုးစိတ်တမျိုးဖြစ်ပြီး ယခင်က ရခိုင်ပြည်နယ် ပင်လယ်ကမ်းရိုး တန်းတလျှောက်တွင် ပေါများစွာ တွေ့ရသော်လည်း ယခုအခါ စစ်တွေ-တောင်ကုတ် ရေလမ်းတလျှောက် အနည်းငယ်သာ တွေ့မြင်ရတော့ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ငါးမန်းတောင်၊ ငါးမန်းသွားနှင့် ငါးမန်းအသည်းများမှာ ဈေးကောင်းလျက်ရှိပြီး ယခုအခါ ငါးမန်း သားပေါက်လေး များကိုပါ စစ်တွေ၊ မြိတ်၊ ထားဝယ်နှင့် ဟိုင်းကြီးကျွန်းရှိ ငါး ဈေးကွက်များတွင် ရောင်းချနေကြကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငါးမန်းမျိုးစိတ်ပေါင်း ၅၂ မျိုးနေထိုင် ကျက်စားလျက်ရှိရာမှ ပင်လယ် ရေငုပ်သမားများ၏ တရားမ၀င် ရောင်းဝယ် မှုများကြောင့် ယခုအခါ ငါးမန်းမျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၆ မျိုးခန့်ကိုသာ တွေ့မြင်ရတော့ကြောင်း ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စာရင်းများအရ သိရှိရသည်။
ငါးမန်းအပြင် မျိုးသုဉ်းအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ရေသတ္တ၀ါတမျိုးမှာ ပင်လယ်လိပ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“လိပ်ဥ၊ လိပ်သားကို လူတွေက ချက်စားလာတဲ့အပြင် လိပ်ခွံတွေကိုလည်း လူ့အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းလုပ်ပြီး ရောင်းချလာကြတယ်။ အဲဒီဈေးကွက်က ပြည်တွင်းမှာတင် တော်တော်ကြီးနေတော့ လိပ်မျိုးထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာဖြစ်လာတာပဲ” ဟု ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဋ္ဌာန၊ ပင်လယ်လိပ် သားပေါက်ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
လိပ်ဥ၊ လိပ်သားချက်များကို ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း မြို့များတွင်သာမက ရန်ကုန် စားသောက်ဆိုင် များတွင်ပါ တွေ့မြင်လာ ရပြီး လိပ်များကို အကောင်လိုက် ဖမ်းဆီးကာ တရုတ်နိုင်ငံ အပါအ၀င် တခြားသော အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများသို့ နယ်စပ်ဂိတ် များမှ တဆင့် တရားမ၀င် တင်ပို့မှုများ ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိပ်ဇောင်းလျား၊ ပြင်သာလိပ်၊ လိပ်ကြက် တူရွေး၊ လိပ်ခွေးနှင့် လိပ်လောင်း ဟူ၍ ပင်လယ်လိပ် ၅ မျိုး ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ လိပ်ဇောင်းလျား တမျိုးတည်းသာ တွေ့ ရတော့ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဋ္ဌာန လိပ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများမှ စာရင်းများအရ သိရှိရသည်။
မျောက်လွှဲကျော်၊ ကြံ့၊ ဆင်၊ ရွှေသမင်၊ ကတိုးဂျီ၊ တောင်ဆိတ်နီ၊ ကျား၊ ကျားသစ်၊ ကြောင်သလင်း၊ ရေ၀က်၊ ၀ံပုလွေ၊ သင်းခွေချပ်၊ စိုင်၊ ဘဲခေါင်းပန်းရောင်၊ ၀ံပို၊ ရေငုံးအမျိုးမျိုး၊ ဇီးကွက်၊ ဒီးဒုတ်၊ မိကျောင်း၊ လိပ်၊ ဆတ်၊ မြင်းဝံ တို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသော တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များအဖြစ် ဥပဒေ ထုတ်ထားသော် လည်း ပြည်ပ နိုင်ငံများသို့ တရားမ၀င် ခိုးရောင်းနေကြသည်မှာ တနှစ်ထက် တနှစ်တိုးပွားလျက် ရှိနေကြောင်း သားငှက်တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ သားရဲတိရစ္ဆာန်များမှာ နယ်စပ်များမှ တဆင့် အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ တရားမ၀င် မှောင်ခို ရောင်းချခြင်း ခံနေရပြီး တချို့မှာမူ စားသုံးသူ တချို့၏ တရားမ၀င် ဈေးကွက်ဖြစ်လျှက်ရှိကာ မျိုးသုဉ်း ပျောက်ကွယ်ရန် ခြိမ်းခြောက် ခံနေရကြောင်း သိရှိရသည်။
“အဓိကကတော့ တရုတ်ပြည်ကို နယ်စပ်တွေကနေ အများဆုံးတင်ပို့နေလို့ပဲ။ တရုတ်ပြည်က တိုင်းရင်းဆေး ဖော်တဲ့နေရာ မှာ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အသွေး၊ အသားနဲ့ အရိုးတွေကို သုံးတယ်။ မြွေတို့ မျောက်တို့ သင်းခွေချပ်တို့ ဆိုရင် အရှင်လိုက်ကို ပို့နေကြတာ” ဟု သူက ဆက်ပြောပြသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ကျောက်မျက်နှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံပိတ်ဆို့ရန် ဘုရှ် ထုတ်ပြန်
ဧရာဝတီ | ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၈
အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဒဗလျူဘုရ်ှက မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်း ထပ်တိုး၍ အမေရိကန် ဈေးကွက်သို့ ကြားနိုင်ငံများမှ တဆင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ကျောက်မျက်ရတနာ တင်သွင်းနေမှု များကိုပါ ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယမန် နေ့က စည်းမျဉ်းအသစ် ထုတ်ပြန်ကာ လက်မှတ် ရေးထိုးလိုက်သည်ဟု အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတွင် ရေးသားဖော်ပြ ထားသည်။
တပြိုင်နက်တည်းတွင် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနကလည်း မြန်မာ စစ်အစိုးရပိုင် သို့မဟုတ် မြန်မာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများနှင့် ပတ်သက်လျှက် ရှိသော ကျောက်မြက်ရတနာ ကုမ္ပဏီများ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်း တိုးမြှင့်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
အိမ်ဖြူတော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့်အခမ်းအနားတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရအား စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်း တိုးမြှင့်လိုက် ကြောင်း အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးရင်း သမ္မတ ဘုရှ် က “မြန်မာစစ်အစိုးရကို သတင်းစကား ပါးချင်တာကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ် တရားမျှတမှုကို ယုံကြည်တယ် ဆိုတာပါပဲ” ဟု ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီပဲရင်းအရေးကိစ္စတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရက တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစတင်ကာ အမေရိကန်နိုင်ငံက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ၎င်းပိတ်ဆို့မှုများကို သက်တမ်းထပ်တိုးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘုရ်ှက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုအသစ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောက်စိမ်းနှင့် ပတ္တမြား အပါအဝင် တခြားသော ကျောက်မျက်ရတနာများကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ စသည့် ကြားနိုင်ငံများ မှတဆင့် အမေရိကန် ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ နေမှုကိုပါ ရပ်တန့်စေတော့မည်ဖြစ်သည်။
ကျောက်မျက်ရတနာမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက် အဓိက ဝင်ငွေရရာ လမ်း ကြောင်း များထဲမှ တခုဖြစ်သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံသည် မြန်မာစစ်အစိုးရကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ရုံသာမကဘဲ မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစု များကို အမေရိကန် ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာပါ ပိတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာစစ်တပ်ပိုင် လုပ်ငန်းများဖြစ်သော မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (MEC) တို့ကို အဓိက ပစ်မှတ်ထား ပိတ်ဆို့လိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း လုပ်ငန်းနှစ်ခုစလုံးမှာ ကျောက်မျက်ရတနာ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်လျှက်ရှိသည်။
ထို့အပြင် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး ဌာနက မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ တပါတည်း ပစ်မှတ်ထား ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကျောက်မျက်တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ မြန်မာ့ သတ္ထုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် ရှိသည်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဘုရ်ှသည် လာမည့် သြဂုတ်လထဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သို့ လာရောက်၍ ပြည်ပရောက် မြန်မာ အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံ စကားပြောမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ လော်ရာဘုရ်ှက ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ရှိ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရတနာပုံ တယ်လီပို့တွင် ရင်နှီးမြှုပ်နှံရန် ကုမ္ပဏီများအား ခွင့်ပြု
ဧရာဝတီ | ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၈
ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ သတင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (အိုင်တီ) ကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုအား ရတနာပုံမြို့သစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ရတနာပုံ တယ်လီပို့၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စစ်အစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ရတနာပုံ တယ်လီပို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ရ သည့် ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ မြန်မာတယ်လီပို့ အပါအ၀င် FISCA Enterprise ၊ MCC and Fourtune International ၊ Myanmar World Distribution ၊ Yadanabon Cyber Corporation ၊ ထူး၊ နိဗ္ဗာန်၊ တာမိုးညဲ ချမ်းသာ ထွန်းဝေသားနှင့် မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ် ကုမ္ပဏီများ ဖြစ်ကြသည်။
ပြည်ပမှ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြုသည့် ကုမ္ပဏီများမှာ ရုရှားပိုင် CBOSS Corpo-ration ၊ Maxinet of Australia နှင့် Global Technology ကုမ္ပဏီများ ဖြစ်ကြသည်။ Global Technology ကုမ္ပဏီသည် ထိုင်းနှင့် အင်္ဂလန် နိုင်ငံများတွင် အခြေစိုက်သည်ဟု ယူဆရသည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင် ရှင်န၀ပ် ထူထောင်ခဲ့သည့် ရှင်း ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်သည့် ZTE ကုမ္ပဏီနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံမှ IP Tel Sdn Bhd ကုမ္ပဏီများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် မရကြကြောင်း စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သူများမှတဆင့် သိရသည်။
အိုင်တီ ကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂ သန်းကို ရင်နှီးမြှုပ်နှံကြရန် သဘောတူထားကြသည်ဟု မြန်မာတိုင်းစ် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
စစ်အစိုးရအား ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်လွှင့်သည့် အင်တာနက် စာမျက်နှာများနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကို ရတနာပုံ တယ်လီပို့ အစီအစဉ်ဖြင့် တင်းကျပ်စွာ ပိတ်ပင်ရန် ရှိသည်ဟုလည်း ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ရှိ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများက ပြောသည်။
မြေဧကတသောင်း အကျယ်အ၀န်းရှိသည့် ရတနာပုံ တယ်လီပို့သည် မန္တလေးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင်ခဲ့သည်။ မြေနေရာအကျယ်အ၀န်း၏ ငါးပုံတပုံကို ကွန်ပျူတာ ဆော့ဝဲလ်နှင့် ဟတ်ဝဲလ် ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် အသုံးပြုသွားမည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ မြန်မာတယ်လီပို့နှင့် ကြံ့ဖွံ့ပိုင် Information Technology Central Services တို့က ချုပ်ကိုင်ထားကြပြီး ၎င်းဌာနများသည် ရန်ကုန်တွင် အခြေစိုက်လျက် ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အင်တာနက်စည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ထိန်းချုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပါဝင်သည်။
မြန်မာအစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းများအား အမေရိကန်အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒဏ်ခတ်
U.S Treasury Department/ ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်နေသည့် ကုမ္ပဏီများအပါအ၀င် မြန်မာ အစိုးရ (သို့) မြန်မာစစ်အရာရှိများ ထိန်းချုပ်သည့် (သို့) ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ (၁၀) ခုကို ငွေ ကြေးဆိုင်ရာ ဒဏ်ခတ်လိုက်ကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြား ပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ့မှ ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုငွေကြေးပိတ်ဆို့မှုသည် (ကွယ်လွန်သူ အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ) တွမ်လန်တို့စ်၏ မြန်မာ့ကျောက်မျက် ပိတ်ပင်ရေး ၂၀၀၈ ဥပဒေကို သမ္မတ လက်မှတ်ထိုးချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေ သည်။
ထိုဥပဒေ ပြဌာန်းခြင်းသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ၊ စစ်ခေါင်းဆောင်များကို စီးပွား ရေးအရရော နိုင်ငံရေးအရပါ ထောက်ပံ့ပေးသူများ၊ ၎င်းတို့၏ အနီးစပ်ဆုံး မိသားစုဝင်များ၊ စစ် အစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာငွေအတွက် အရေးပါသည့် အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းတို့ကို ပိတ်ဆို့ထားမှုများ ထပ်မံချဲ့ထွင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖိနှိပ်တဲ့ စစ်အစိုးရနဲ့ စစ်အစိုးရကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေကို ပိုပြီးတင်းကျပ်တဲ့ ငွေကြေးပိတ်ဆို့မှု လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ကလုန်းဒုက္ခသည် တွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့၊ ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေ ခွင့်ပြုဖို့ကို စစ်အစိုးရ ငြင်းဆန်လိုက် တာဟာ ပြည်သူတွေကို အကြင်နာမဲ့စွာ လစ်လျူရှုထားတာကို ပြလိုက်တဲ့ နောက်ထပ် ဥပမာ တခုပါပဲ”ဟု နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာ အဒမ် ဂျေ ဇူဘင်းက ပြော သည်။
ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်သော ငွေကြေးပိတ်ဆို့မှုသည် မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက် အရေးကြီး သည့် ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ကြီးကြီးမားမား ရှိနေသည့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းကြီး နှစ်ခုစလုံးကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစစ်အစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း မျိုးစုံတွင် အကျိုးစီးပွား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ကိုင်နေသည့် ကုမ္ပဏီကြီးများ ဖြစ်သည်။
ထုတ်ပြန်လိုက်သော ငွေကြေးပိတ်ဆို့မှု၏ ရလာဒ်အဖြစ် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်၏ လက်ခွဲကုမ္ပဏီ လေးခုဖြစ်သည့် မြန်မာ ပတ္တမြားအင်တာပရိုက်စ်၊ မြန်မာအင်ပါရီယယ် ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီ လိမိ တက်၊ မြ၀တီ ကုန်သွယ်ရေး လိမိတက်နှင့် မြ၀တီဘဏ် လိမိတက်တို့ကိုလည်း နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ။ အမေရိကန် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် စီးပွားရေးမလုပ်ရန် နာမည်ပျက်ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
ယခုငွေကြေး ပိတ်ဆို့မှုထဲတွင် စစ်အစိုးရပိုင် မြန်မာ့သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ အမှတ် (၁) သတ္ထု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၊ အမှတ် (၂) သတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အမှတ် (၃) သတ္ထုတူး ဖော်ရေးလုပ်ငန်းတို့ကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားသည်။ သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ သမ၀ါ ယမ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းလည်း ပါဝင်သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဖြစ်စေ စစ်အစိုးရ၏ အရာရှိတဦးဖြစ်စေ၊ အရာရှိများဖြစ်စေ တိုက်ရိုက်သော် လည်းကောင်း သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ပိုင်ဆိုင်ထားသော၊ ထိန်းချုပ်ထားသော ပိုင်ဆိုင် မှုများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု အကျိုးအမြတ်များကို အမေရိကန်အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအား ပိတ်ဆို့ ခွင့်ပြုလိုက်သည့် သမ္မတအမိန့် (၁၃၄၆၄) အရ အရေးယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ (၂၀၀၈) ခုနှစ် ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့ကလည်း မြန်မာအစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းသုံးခုဖြစ်သည့် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာလုပ်ငန်း၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာ့ ပုလဲလုပ်ငန်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု အကျိုးအမြတ်များကို သမ္မတအမိန့် နောက်ဆက်တွဲ (၁၃၄၆၄) အရ သမ္မတဘုရ်ှက ပိတ်ဆို့ ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ငွေကြေးပိတ်ဆို့မှု ဥပဒေသစ်အရ အမေရိကန် တရားစီရင်ရေးက သတ်မှတ်ထားသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံသားများ၊ အမေရိကန် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေး မလုပ်ရန် နာမည်ပျက် ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့စာရင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးစုံကို ပိတ်ဆို့ထားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသူများနှင့် မည်သည့်အမေရိကန်နိုင်ငံသား၊ မည်သည့် အမေရိကန်လုပ်ငန်း အေဂျင်စီများမဆို ဘဏ္ဍာရေး အရဖြစ်စေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုအရဖြစ်စေ တားမြစ်သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအား အဓိက ထောက်ပံ့နေသော မြန်မာပြည်သူလူထုကို စနစ်တကျ ဖိနှပ်နေသည့် စစ်အစိုးရကို အထူးထောက်ပံ့ပေးနေသော ပိတ်ဆို့ထားသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအား သိရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ။
မြန်မာကုန်စည် အမေရိကန်တင်သွင်းခွင့် ပိတ်သည့်ဥပဒေကို သမ္မတက သက်တမ်းတိုး
Agencies/ ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
အမေရိကန်သို့ မြန်မာကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှု ပိတ်ပင်သည့် ဥပဒေကို သမ္မတဂျော့ခ်ျ ဒဗလျူ ဘုရ်ှက သက်တမ်းတိုးလိုက် ပြီး မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာများအား တတိယနိုင်ငံများမှတဆင့် တင်သွင်းမှုကို ပိတ်ပင်သည့် ဥပဒေအသစ်ကိုလည်း လက် မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုလိုက်သည်။
သမ္မတဘုရ်ှက “အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို အပြည့်အ၀ ယုံကြည်တယ် ဆိုတာကို မြန်မာစစ်အစိုးရကို ကျနော်တို့ အသိပေးချင်ပါတယ်” ဟု ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သည့် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် ပြောသည်။
ထို့အပြင် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့် လက်အောက်အရာရှိကြီးများ ပိုင်ဆိုင်(သို့) ထိန်းချုပ်ထားသော ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီများ အပါ အ၀င် ကုမ္ပဏီ (၁၀) ခုကို ဘဏ္ဍာရေးအရ ပိတ်ပင်ဆို့မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ခုတွင် သမ္မတဘုရှ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ဥပဒေ The Burmese Freedom and Democracy Act အား ပိုမိုခိုင်မာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကွယ်လွန်သူ အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း မစ္စတာ တွမ်လန်းတော့စ်က Block Burmese JADE Act ခေါ် အဆိုပါ မြန်မာ့ကျောက်မျက်တင်သွင်းမှု ပိတ်ပင်ရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို ၂၀၀၇ ခု၌ ဦးဆောင်ရေးဆွဲ အဆိုပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေပြီး ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုများကို ဖိနှိပ်နေသော မြန်မာစစ်အစိုးရကို နိုင်ငံခြားငွေ အဓိကရှာပေးနေသည့် လမ်း ကြောင်းတခုဖြစ်သဖြင့် ယခု ဥပဒေအသစ်ကြောင့် စစ်အစိုးရအတွက် နှစ်စဉ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းရာနှင့်ချီ၍ နစ်နာစေမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များအား အမေရိကန် ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်သကဲ့သို့ တတိယနိုင်ငံများမှတဆင့် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ အစည်းများအား အသုံးပြုနေမှုကိုလည်း ယခု ဥပဒေသစ်အရ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်သွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်မှ ချမှတ်ထားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဥပဒေများသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရင်းအမြစ်များကိုသာ ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်ပြီး သာမန်ပြည်သူများအတွက် နစ်နာမှုမရှိကြောင်း သမ္မတအိမ်တော် ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီး ဒါနာပရီနိုက ထပ်မံပြောဆိုသည်။
ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး ဒါနာပရီနိုက “စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးဖို့ အမေရိကန်က သီးသန့် လုပ်ဆောင် နေတဲ့အပြင် အခြားနိုင်ငံတွေကလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အတွက် ဒီပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုဟာ ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်နေတဲ့ သူတွေကိုသာ ဦးတည်တာပါ။ ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး” ဟု ပြောသည်။ ။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူ (၁) ထောင်လျှင် (၇) ဦးနှုန်း အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်ခံနေရ
ပီတာအောင်/ ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ဒေါက်တာစန်ဂန် (၀ဲ) အား ဘန်ကောက်မြို့ (FCCT) တွင် ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းစေသည့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံနေသူ အရေအတွက် သိသိသာသာ လျော့နည်းကျဆင်းသွားသော်လည်း လူ (၁) ထောင်လျှင် (၇) ဦး ကူးစက်ခံနေ ရဆဲဖြစ်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ယူအန်အေ့ဒ်စ် (UNAIDS) အဖွဲ့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကူးစက်ခံနေရသည့် အရွယ်ရောက်သူနှင့် ကလေးဦးရေသည် ၂၀၀၁ ခုတွင် (၃၀၀,၀၀၀) ခန့် ရှိရာမှ ၂၀၀၇ခု၌ (၂၄၀, ၀၀၀) ခန့်သာ ရှိတော့သည်ဟု ယမန် နေ့ထုတ် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ကျဆင်းသွားရခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၌ ကူးစက်မှု ကျဆင်းသွား၍ ဖြစ်သည်ဟု ယူအန်အေ့ဒ်စ်အဖွဲ့ ဒေသတွင်းအစီစဉ် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာစန်ဂန်က ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအသင်း၌ ယနေ့နံနက် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
၎င်းက “ဆေးခန်းတွေက ရရှိတဲ့ စာရင်းတွေအရ များသောအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေမှာ ကူးစက်မှု သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်အတွင်းမှာ အဲဒီအုပ်စု အကြားမှာ (၂.၅) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကနေ (၁) ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ကျော်လောက်ထိ ကျဆင်းသွား တယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒေသတွင်းမှာတော့ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကူးစက် နှုန်း အမြင့်မားဆုံး ဖြစ်နေတုန်းပဲ” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ (၁) ထောင်လျှင် (၇) ဦး အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကူးစက်ခံနေရကြောင်း၊ အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) နှစ်အကြား လူငယ်အမျိုးသမီး (၁) ထောင်လျှင် (၆) ဦးနှင့် လူငယ်အမျိုးသား (၁) ထောင်လျှင် (၇) ဦးနှုန်း ဖြစ်ပွားနေပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် စာရင်းအရ အ်ိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကြောင့် သေဆုံးသူ (၂၄,၀၀၀) ဦး ရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
အာရှ ဒေသတခုလုံး၌ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကူးစက်ခံနေရသူပေါင်း (၅) သန်းရှိပြီး တကမ္ဘာလုံး၌ (၃၃) သန်းရှိကြောင်းနှင့် နိုင်ငံအများအပြားတွင် လူငယ်လူရွယ်များအကြား ကွန်ဒုံးသုံးဆွဲမှု ပိုမိုများပြား လာကြောင်း ယူအန်အေ့ဒ်စ် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ။
လယ်သမားများ ဓာတ်မြေသြဇာ အခက်အခဲဖြစ်
NEJ/ ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ယခုနှစ် စပါးစိုက်ပျိုးရာသီ၌ လယ်သမားအများစု စိုက်ခင်းထဲသို့ ထည့်မည့် ဓာတ်မြေသြဇာ ၀ယ်ယူ ရန် ငွေကြေးမတတ်နိုင်၍ နီးစပ်ရာ အန်ဂျီအိုများနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် (WFP) အဖွဲ့များထံ အကူအညီတောင်းထားကြကြောင်း လယ်သမားများက ပြောသည်။
လပွတ္တာမြို့နယ် ထုံးဘူးကျကျေးရွာအုပ်စု ဘီတွတ်ကျေးရွာမှ လယ်သမားတဦးက “အစိုးရက ရောင်းချပေးတဲ့ ပုလဲဓာတ်မြေသြဇာက အိတ်အရေအတွက် အနည်းငယ်သာ ရှိပြီး လယ်သမား တိုင်းမရလို့ အခက်တွေ့နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
=ယခင်နှစ်များထက် ယခုနှစ်တွင် ဓာတ်မြေသြဇာ ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်း၊ လိုအပ်ရသည့် အကြောင်းမှာ မျိုးစပါးအခက်အခဲကြောင့် အချိန်နောက်ကျမှ စပါးစိုက်နိုင်ပြီး တမန်းညက်အောင် မထွန်နိုင်သည့် အတွက်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ လယ်သမားက ရှင်းပြသည်။
က “ အချိန်နောက်ကျတော့ လယ်ထဲမှာ တမန်းညက်အောင် မထွန်နိုင်ဘူး။ မြက်တွေ မပုတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ စိုက်ပြီးနောက် ဓာတ်မြေသြဇာ ထည့်ဖို့ လိုလာတယ်။ ကျနော့်လယ်ဆိုရင် တဧက (၃) အိတ်လောက် ထည့်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေက မရှိဘူး။ ဒီတော့ လပွတ္တာမြို့ပေါ် တက်ပြီး အန်ဂျီအို အဖွဲ့တွေကို တနည်းနည်းနဲ့ အကူအညီပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံထားတယ်။ ကူညီ တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ စပါးပေါ်ချိန် စပါး ပြန်ပေးရတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ လယ်သမားကဲ့သို့ အခြားရွာများမှ လယ်သမားများလည်း လာရောက်အကူအညီ တောင်းခံ ထားခြင်းမျိုး ရှိကြောင်း လပွတ္တာာမြို့ပေါ်၌ ရုံးစိုက်ထားသည့် အန်ဂျီအိုတခုမှ တာဝန်ခံတဦးက ပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက် နယ်စပ်သွင်း ကုန်ပစ္စည်းအချို့ကို အကောက်ခွန် လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပြုခဲ့ရာတွင် ဓာတ်မြေသြဇာ မပါဝင်သည့်အတွက် ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်နေကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင် (၂၈) ရက် ပေါက်ဈေး ရွှေတောင် အပင်အားတိုးဆေး ပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ တအိတ် (၃၁,၃၀၀) ကျပ်၊ ဓူဝံတံဆိပ်က (၃၁,၅၀၀) ကျပ်၊ သံကွင်းတံဆိပ်က ကျပ် (၄၀,၀၀၀) အထိ ဈေးပေါက်နေပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် တအိတ် ကျပ် (၂၅,၀၀၀) ကျော်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မြင့်တက်လာ ကြောင်း၊ အသီးအားတိုးဆေး တီစူပါ (၁၆) ရာခိုင်နှုန်းမှာ တအိတ် (၁၃,၈၀၀) ကျပ်၊ (၁၂) ရာခိုင် နှုန်းက (၁၂,၅၀၀) ကျပ် ဈေးနှုန်းရှိပြီး ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာများကိုမူ အချိုးအစားလိုက်ပြီး ကျပ် (၅၀,၀၀၀) မှ (၂၂,၀၀၀) အထိ ဈေးပေါက်နေသည်။
ဓာတ်မြေသြဇာ အခက်အခဲ မပေါ်ခင်ကတည်းက လယ်ထွန်စက် အခက်အခဲ၊ လောင်စာဆီ အခက် အခဲ၊ မျိုးစပါးအခက်အခဲနှင့် ရရှိသည့် မျိုးစပါးများ အပင်မပေါက်သည့် ပြဿနာများ ကြုံခဲ့ရသည့် အတွက် လယ်သမားအများအပြားသည် လယ်မြေအများစုကို စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း မရှိကြဘဲ စိုက်ပျိုး နိုင်သည့် လယ်သမားများသည်လည်း ဓာတ်မြေသြဇာပြဿနာ ထပ်ဆင့်ကြုံတွေ့နေရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဓာတ်မြေသြဇာ တင်သွင်းရာ၌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသား အောင်သက်မန်း ပိုင် ဧရာရွှေဝါ ကုမ္ပဏီသည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ဓာတ်မြေသြဇာ ဈေးကွက်ဝေစုကို လည်း အကြီးမားဆုံး ရရှိထားသူဖြစ်ကြောင်း ဆန်စပါး လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
ပထမဆုံး နာဂစ်ရန်ပုံငွေ ဟစ်ဟော့ရှိုးပွဲ
နာဂစ်ရန်ပုံငွေ ရှာမည့် နာမည်ကြီး ဟစ်ဟော့အဆိုတော် အချို့
နာဂစ်အတွက် ရန်ပုံငွေရရှိစေရန် မြန်မာ့ပထမဆုံး ဟစ်ဟော့ အဆိုတော်များ တစုတပေါင်းတည်း ပါဝင်ကြမည့် ဟစ်ဟော့ပွဲကို သြဂုတ် (၃) ရက် သုဝဏ္ဏ အမျိုးသားအားကစားရုံ၌ ကျင်းပပြု လုပ်မည်။
ဟစ်ဟော့တေးဂီတဖြစ်သော်လည်း နာဂစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ပုံငွေ ရှာသည့်ပွဲဖြစ်သဖြင့် သီဆို ဟန်များ၊ ကခုန်မှုပုံစံများ၊ စင်ပေါ်က ပရိသတ်ကို နှုတ်ဆက်ဟန်ကစ၍ နွေးထွေးမှု ကရုဏာအပြည့် ပုံစံဖြင့် သီဆိုကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဟစ်ဟော့ အဆိုတော်များက အခကြေးငွေမယူဘဲ တဦးလျှင်၊ အဖွဲ့တဖွဲ့လျှင် သီချင်း (၂) ပုဒ် သီဆိုပေးကြမည်ဖြစ်သည်။
ပါဝင်သီဆိုကြမည့်သူများမှာ မျိုးကျော့မြိုင်၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ရဲလေး၊ ရသ၊ စောညီညီ (too big)၊ အနဂ္ဂ၊ ဘာဘူ၊ သားစိုး၊ J-me၊ ကြက်ဖ၊ထွန်းထွန်း(Example)၊ မိုးမိုး၊ လင်းလင်း၊ ကျော်သူစိုး၊ ချမ်းအေးဝင်း၊ ဘိုလေး (ယုန်လေး)၊ လင်းပင်ဟိန်း၊ ဂျောက်ဂျက်၊ Wai လျှံ၊ အာဘွိုင်း၊ ၀ိုင်းစုခိုင် သိန်း၊ နန်းဆုရတီစိုး၊ ပြည့်ဖူးခိုင်၊ စန္ဒီမြင့်လွင့်၊ သီရိဆွေ၊ သဇင်၊ No (ရီမွန်+ရတနာ)၊ Cartoon၊ Blueberry၊ Cyclone၊ Double Beatz၊ Project #1 စသည်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၀င်ကြေးများကို (၈,၀၀၀) နှင့် (၅,၀၀၀) သတ်မှတ်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး လေဘေးသင့် ပြည်သူများ အတွက် ရည်ရွယ်၍ စိတ်ဖြေသိမ့်မည့် သီချင်းများကို သီဆိုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟစ်ဟော့ အဆိုတော် အနဂ္ဂက ပြောသည်။
ဟစ်ဟော့တေးဂီတ အဆိုရှင်များ အနေဖြင့် နာဂစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့ ရေးစပ်ထားကြသည့် သီချင်းများကို လွတ်လပ်စွာ သီဆိုကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဟစ်ဟော့ လူငယ် (၂၀) တို့က အထူး ရေးဖွဲ့ထားသော သီချင်းတပုဒ်ကိုလည်း စီစဉ်တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရေးသူမှ မိမိရေးသော သီချင်းပိုဒ်ကို ကိုယ်တိုင်သီဆိုသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က ပြောသည်။
မြန်မာ့ဟစ်ဟော့ အဆိုတော်များကို အစိုးရက စောင့်ကြည့်လေ့ရှိပြီး အက်ဆစ်ဟစ်ဟော့အဖွဲ့မှ အဆိုတော် ဇေယျာသော်ကို ယခုအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် နာဂစ်ရန်ပုံငွေ ဟစ်ဟော့ပွဲတွင်လည်း အစိုးရကစောင့်ကြည့်နိုင်သည်ဟု ဟစ်ဟော့အသိုင်းအ၀န်းက ဝေဖန် ပြောဆိုနေကြသည်။ ။
အာဏာပိုင်များနှင့်နီးစပ်သူများက ဖမ်းဆီးတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူ
NEJ/ ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ သိန္ဓီမြို့နယ် ရေပူစစ်ဆေးရေးဂိတ်၌ ဖမ်းဆီးထားသည့် ပစ္စည်းများကို အာဏာပိုင်များနှင့် နီးစပ်သည့် ကုန်သည်များက ထုတ်ယူနေကြကြောင်း နယ်စပ်ကုန်သည် အသိုင်းအ၀န်းက ပြောသည်။
၂၀၀၆ ခု ဧပြီအတွင်း (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန် ဖွင့်စဉ်ကာလအတွင်း ကုန်ကားများ ဆင်းခွင့် မရဘဲ တရုတ်ပြည်ဘက် ရက်အတော်ကြာ စုပြုံထားပြီးနောက် မြန်မာပြည်ဘက် ပြန်ဆင်းချိန်တွင် အပိုသယ်လာသည့် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ အမျိုးအမည်၊ အရေအတွက် စာရင်းလိမ်ပြီး အခွန်မဆောင်ဘဲ သွင်းလာသည့် ကုန်စည်များကို ကား (၉၉) စီးနှင့်အတူ ၂၀၀၆ ခု မေ (၅) ရက်တွင် ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း သိန္ဓီမြို့နယ် ရေပူစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ရမခ လက်အောက်ခံ တပ်များက စစ်ဆေး ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ နကသအရာရှိများ အပါအ၀င် ကုန်သည်များ၊ အေးဂျင့်များ၊ ကားသမားများကို ဖမ်းဆီးခဲ့သကဲ့သို့ အချို့ကုန်သည်များလည်း ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်ခဲ့ကာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ကမောက်ကမများ လအတော်ကြာ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။
ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်များမှာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပြီး အချို့လည်း မိမိပစ္စည်းပါဟု ၀န်ခံထွက်ဆို ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ပိုင်ရှင်မဲ့အဖြစ် သိမ်းယူထားသည့် ပစ္စည်းများမှ အချို့ကို လေလံတင် ရောင်း ချပြီး အချို့ကို ရမခက ထုတ်ယူသွားခဲ့ကာ ယခုနောက်ဆုံး လက်ကျန်ပစ္စည်းများကို ရမခနှင့် နီးစပ်သည့် ကုန်သည်များက ထုတ်ယူနေသည်ဟု နယ်စပ်ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကျန်နေတာက ကုန်မာပစ္စည်းတွေလိုမျိုးပဲ။ လူသုံးကုန်တွေ၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းတွေ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေလိုမျိုးပေါ့။ ကားတစီးစာ အဲဒီတုန်းက ဈေးနဲ့ကို သိန်း (၅၀၀) အထက် မှာ ရှိတယ်။ အခုဆို ဈေးတွေတက်တော့ သိန်း (၁,၅၀၀) လောက် ရှိနေပြီ။ အဲဒါကို ပိုင်ရာဆိုင်ရာက တဆင့် ရမခကို ဘာရန်ပုံငွေ၊ ညာရန်ပုံငွေဆိုပြီး သိန်း (၂၅၊ ၃၀) ထည့်လိုက်ရင် ကားတစီးတိုက်စာ ထုတ်လို့ရပြီ။ နောက်တခုက ကျမ်းကျိန်တာပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေပါဆိုပြီး တရားရုံးမှာ ကျမ်း ကျိန်ပြီး ဒဏ်ကြေးဆောင်တာရယ်၊ ပေးကမ်းရတာတွေရယ် သိန်း (၇၀၊ ၈၀) လောက်ရင်းပြီး ပစ္စည်းတွေ ပြန်ထုတ်ပဲ။ ဘယ်ကားနဲ့ ဘာပစ္စည်းတွေ ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သူ့ဇစ်မြစ်တော့ သိဖို့ လိုတာပေါ့။ ဒါလည်း စာရေးတွေ၊ ဘာတွေကနေ လိုက်လို့ရတာပဲ” ဟု ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ကား (၉၉) စီးနှင့် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်များကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်းမှာပင် ရမခနှင့် နီးစပ် သူများကိုသာ လက်သိပ်ထိုး ရောင်းချလိုက်ပြီး ၂၀၀၇ ခု နိုဝင်ဘာတွင် ဖယောင်းများကို လေလံတင် ရောင်းချခဲ့ကြောင်း၊ ဓာတ်မြေသြဇာများကိုမူ ရမခ၌ တပ်စိုက်ခင်းများ၊ လယ်မြေများတွင် အသုံးပြု ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ကုန်သည်က ပြောသည်။
ပစ္စည်းပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ပစ္စည်းများကို ပြန်မထုတ်ရဲသဖြင့် အခြားကုန်သည်များက အာဏာပိုင်များနှင့် ပေါင်းပြီး ကလိမ်ကကျစ်ကျကာ ထုတ်ယူနေမှုကို သိသိကြီးနှင့် ငြိမ်နေရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပစ္စည်းပိုင်ရှင် ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “အဲဒီမှာ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းတွေ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ အဲဒီပစ္စည်းတွေကို နာဂစ်ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေးတွေမှာ သုံးလိုက်စမ်းပါ။ ကျနော်တို့ ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံတယ်။ အခုတော့ အဖမ်းခံရမှာကြောက်လို့ သွားပြီး မျက်နှာမပြရဲတာကို အခွင့်ကောင်းယူ လုပ်နေတာ” ဟု ပြောသည်။
ကုန်သွယ်မှုစည်းကမ်းများနှင့် မကိုက်ညီသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးထားသည့် အဆိုပါ ကား (၉၉) စီးတိုက် ကုန်ပစ္စည်းများမှ လက်ကျန်ပစ္စည်းများကို အာဏာပိုင်များနှင့် နီးစပ်သည့် ကုန်သည်များက ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှ စတင်၍ ထုတ်ယူနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံကုန်သည် များက ပြောသည်။ ။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင် မြန်မာစစ်အစိုးရအား ငွေချေးသည့်အမှု စစ်တော့မည်
Agencies/ ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင် ရှင်နာဝါထရာက ၎င်းအာဏာရှိစဉ် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ငွေထုတ် ချေးခဲ့မှု အရှုတ်အရှင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုင်းတရားရုံးချုပ်က ကြားနာစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သဘောတူလိုက်သည်။
“စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေ တင်သွင်းခဲ့တဲ့ စွပ်စွဲမှုတွေဟာ ကြားနာစစ်ဆေးဖို့ ခိုင်လုံလို့ တရားရုံးက အခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ” ဟု တရားသူကြီး ပန်ယာ ဆူထိဘိုဒီက တရားရုံး၌ပြောသည်။ အမှုကို ယခုနှစ် စက်တင်ဘာ ဒုတိယပတ်တွင် စတင်ကြားနာမည်ဟုလည်း သတ်မှတ်ကြသည်။
ထိုင်းသွင်းကုန်-ထုတ်ကုန်ဘဏ်မှ မြန်မာစစ်အစိုးရသို့ ထုတ်ချေးခဲ့သည့် ငွေများသည် မစ္စတာ တပ်ဆင်၏ Shin Satellite ဂြိုလ်တုကုမ္ပဏီမှ ၀န်ဆောင်မှုများ ၀ယ်ယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၂၀၀၆ ခု အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ထောက်ခံသော စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက စွပ်စွဲ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအနေဖြင့် Shin Satellite ကုမ္ပဏီမှ ၀န်ဆောင်မှုများ ပိုမိုဝယ်ယူနိုင်ရန် ထိုင်းသွင်း ကုန်-ထုတ်ကုန်ဘဏ်မှ မြန်မာသို့ ထုတ်ချေးမည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၉) သန်းကျော်နှင့် ညီမျှ သော ထိုင်းဘတ်ငွေ သန်း (၃,၀၀၀) အစား သန်း (၄,၀၀၀) ထုတ်ပေးရန် မစ္စတာတပ်ဆင်က ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက စွပ်စွဲသည်။
Shin Satellite ကုမ္ပဏီသည် မစ္စတာတပ်ဆင် တည်ထောင်ခဲ့သော ရှင်းကော်ပိုရေးရှင်း တယ်လီ ကွန်အုပ်စု၏ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စင်္ကာပူအစိုးရနှင့် ဆက်စပ်နေ သော Temasek Holdings သို့ အခွန်လွတ် သဘောတူညီမှုဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည်။ ယင်းကိစ္စကြောင့် ပြည်သူများ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဆီသို့ ဦးတည် သွားခဲ့ သည်။
အဆိုပါအမှုသည် မစ္စတာတပ်ဆင် ရင်ဆိုင်နေရသော ၎င်း၏ဇနီးအား နိုင်ငံပိုင် မြေကွက်တခုကို ပေါက်ဈေး၏ သုံးပုံတပုံခန့်ဖြင့် ၀ယ်ယူခွင့်ရရှိရေး၌ အာဏာအလွဲသုံးမှု အပါအ၀င် အဂတိမှုများ အနက် တခုဖြစ်သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရသို့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ငွေထုတ်ချေးမှုအား ကြားနာရန် ယနေ့ သဘော တူခဲ့သော တရားရုံးသို့ မစ္စတာတပ်ဆင်နှင့် ၎င်း၏ရှေ့နေများ တက်ရောက်ခြင်း မရှိပေ။ ။
မြန်မာစစ်အစိုးရကို ငွေချေးသည့်ကိစ္စ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင်ကို တရားစွဲမည်
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင် ရှင်နာဝပ်အပေါ် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနဲ့ စွဲချက်အသစ်တင်ထားတာကို ကြားနာဖို့ ထိုင်းတရား ရုံးချုပ်က သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းထုတ်ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်ကနေ မြန်မာအစိုးရကို အတိုးနှုန်းနည်းနည်းနဲ့ ငွေချေးဖို့ အတည်ပြုခဲ့တာဟာ သူ့ကိုယ်ကျိုး စီးပွားအတွက်လုပ်ခဲ့တာလို့ အစိုးရစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီတခုက စွပ်စွဲထားတာပါ။ ဒေါ်လာ သန်း ၁၂၀ ချေးငွေနဲ့ အဲဒီအချိန် က မစ္စတာတက်ဆင်မိသားစုပိုင် ရှင်းဂြိုဟ်တုကုမ္ပဏီကနေ ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံက၀ယ်ယူဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
အမှုအတွက် ပထမဆုံးကြားနာပွဲကို စက်တင်ဘာလလယ်မှာလုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
သူဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုစွဲချက် အများအပြားကို မစ္စတာ တက်ဆင် ရင်ဆိုင်နေရရပါတယ်။ သူ့အစိုးရက နိုင်ငံတော်အောင်ဘာလေထီ စဖွင့်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက ထီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှု ရှိ-မရှိ မစ္စတာတက်ဆင်အပါအ၀င် ၀န်ကြီးဟောင်း ၄၇ ယောက်တို့ကို ကြားနာစစ်ဆေးဖို့ တနင်္လာနေ့ကပဲ တရားရုံး ချုပ်က သဘောတူခဲ့ပါသေးတယ်။
မစ္စတာတက်ဆင်ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး ရာထူးကဖြုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ကော်မတီတရပ်ဖွဲ့စည်းပြီး အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ သူ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ မလျော်မကန်ပြုကျင့်မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
ဘောစနီးယားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရာဒိုဗန် ခရာဒစ်ရ်ှကို ICC မှာ ရုံးတင်တော့မည်
ဘော်စနီးယား-ဆာ့ဘ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရာဒိုဗန် ခရာဒစ်ရ်ှဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အတွက် The Hague မြို့က ကုလသမဂ္ဂရဲ့ နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်တရားခုံရုံးကို ရောက်သွားပါပြီ။
ခရာဒစ်ရ်ှဟာ ဆားဘီးယားမြို့တော် ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ကနေ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက် လင်းအားကြီးအချိန်မှာ နယ်သာလန်ကို လေယာဉ်နဲ့ ရောက်သွားတာပါ။ ၁၂ နှစ်ကြာ ၀ရမ်းပြေးနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်မှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ဘဲလ်ဂရိတ်မှာ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ ပါတယ်။
ခရာဒစ်ရ်ှဟာ ကမ္ဘာမှာ အလိုအရှိဆုံး ၀ရမ်းပြေးတွေထဲက တဦးပါ။ ဘော်စနီးယားမြို့၊ ဆရီဘရန်နီကာမှာ မူစလင်အမျိုးသားနဲ့ ယောက်ျားလေး ၈၀၀၀ ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်က အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တာမှာ သူပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီး လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ရာဇ၀တ် တရားခုံရုံးက သူ့အပေါ် စွဲဆိုထားတာပါ။
အမေရိကန် အရေးယူမှုစာရင်းမှာ စစ်အစိုးရနှင့်ပတ်သက်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့ ထပ်မံထည့်သွင်း
ဒီမိုကရေစီကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို နောက်ထပ် အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာစစ်အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းတွေကို နောက်ထပ်တိုးမြှင့် အရေးယူတာတွေ လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ ဒီတော့ အခုအရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတွေက မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ ဘယ်လိုများ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါသလဲ။ မြန်မာ့စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘောဂဗေဒ ပညာရှင် ဦးမော်သန်း ကို ဦးအောင်လွင်ဦးက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ ပျက်ကွက်နေတာ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် အရေးယူပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်လာတဲ့ နေရာမှာ မနေ့ကဆိုရင်လည်း အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာစစ်အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းတွေကို ပိတ်ဆို့ အရေးယူမယ့် အမည်စာရင်းထဲမှာ နောက်ထပ် ထည့်သွင်းလိုက်တာပါ။ အစိုးရက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက် နဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတို့ရဲ့ လက်အောက်ခံ ကျောက်မျက်၊ ဘဏ်နဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို အဓိက ပစ်မှတ်ထား အရေးယူခဲ့တာပါ။ ဒီအထဲမှာ၊ Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Company Ltd., Myawaddy Trading Ltd., နဲ့ Myawaddy Bank Ltd., စတဲ့ လုပ်ငန်း ၄ ခု တို့အပြင် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း အမှတ် - ၁၊ ၂၊ ၃၊ နောက် သမ၀ါယမ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းတို့ကိုလည်း အရေးယူ ပိတ်ဆို့မယ့် စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းခဲ့တာပါ။ ဒါဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ အစိုးရအတွက် ၀င်ငွေရပေါက်ရလမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့ဖို့ ပစ်မှတ်ထား လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ပစ်မှတ်တွေ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ အထိ ထိရောက်မှု ရှိနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် အငြိမ်းစားပါမောက္ခချုပ် ဦးမော်သန်း ရဲ့ အမြင်ကို ကျနော် မေးကြည့်ပါတယ်။
"အဲဒါက ရှင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ပို့ကုန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အဓိက ၀င်ငွေက ကျောက်စိမ်းတို့၊ ကျောက်မျက်ရတနာတွေတို့ ပေါ့လေ။ အစိုးရက လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေပေါ့။ အစိုးရက သူပဲ reserved လုပ်ထားတယ်။ သူပဲ ကိုင်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေ ကိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ အဲဒါတွေ ကိုင်ရင်တော့ အစိုးရ ကော်ပရေးရှင်းတွေ ပိုပြီး ထိခိုက်မှာပေါ့။ တိုင်းပြည်အနေနဲ့လည်း နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလုပ်ငန်းတွေ ပေါ်မှာ အမှီပြုရတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ ပိုထိခိုက်တာပေါ့။"
ဒါပေမဲ့လည်း ဒီလို ပြည်ပနိုင်ငံတွေက ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေဟာ အကျိုးထက်အပြစ်သာဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီး လက်မခံလိုသူတွေရှိကြသလို၊ မြန်မာစစ်အစိုးရ ကိုယ်တိုင်ကလည်း တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုကိုသာ ထိခိုက်နစ်နာစေတယ် ဆိုပြီး တုန့်ပြန်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးမော်သန်း ကတော့ အခုလို သုံးသပ်ပါတယ်။
"တိုက်ရိုက်ထိခိုက်မှာကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကော်ပရေးရှင်းတွေ ပေါ့လေ။ နိုင်ငံပိုင် ကော်ပရေးရှင်းတွေဆိုတာက အစိုးရနဲ့ ဆိုင်တာပေါ့လေ။ သူတို့မှာတော့ တိုက်ရိုက်သွားပြီး ထိခိုက်မှာပေါ့။ သူတို့ပေါ်မှာ မှီနေတဲ့ ပြည်သူကတော့ အလုပ်အကိုင် ရရှိမှု အနေနဲ့ ထိခိုက်မယ်။ နောက်တခုက နိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံခြားငွေ ရပေါက်ရလမ်း၊ ၀င်ငွေ ရပေါက်ရလမ်းက ဒီကော်ပရေးရှင်းတွေပေါ်မှာမှီရတယ်ဆိုတော့ နိုင်ငံလည်းပဲ ထိခိုက်မှာပါပဲ။ ဒီကော်ပရေးရှင်းအနေနဲ့ အဓိကအားဖြင့် လှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာ၊ ပြည်ပနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာ အဓိက တံခါးပေါက်လို ဖြစ်နေတာ။ အကျိုးခံစားခွင့် ကိစ္စရပ်တွေအတွက် ဒီကော်မတီကြီးက ဂိတ်ပေါက်လို ဖြစ်နေတာ။ ကျန်တဲ့ စီးပွားရေးကတော့၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကတော့ ဒီလောက် ထိခိုက်မယ်မထင်ပါဘူး။"
နိုင်ငံတကာက မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့အထဲမှာ အပြင်းထန်ဆုံးလို့ ဆိုရမယ့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုသလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို အမေရိကန် နိုင်ငံထဲ တင်သွင်းတာတွေကို တိုးမြှင့်ပိတ်ပင်တဲ့ ဥပဒေမူကြမ်းတရပ်ကိုလည်း သမ္မတ ဂျော့ဂ်ျ ဘုရှ် က မနေ့ကပဲ လက်မှတ် ရေးထိုး အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေမှာ မြန်မာ့ကျောက်မျက်တွေကို တတိယ နိုင်ငံတွေက တဆင့် အမေရိကန်နိုင်ငံထဲ တင်သွင်းတာတွေကို တားမြစ်ထားတာမျိုး မရှိပဲ ဖြစ်နေရာက အခုတော့ အဲဒီလိုပါ တင်သွင်းခွင့် မရှိတော့တဲ့ ဥပဒေသစ် တရပ်ကို ချမှတ်လိုက်တာပါ။ စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးမော်သန်း ကတော့ ဒီဥပဒေသစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုလို မြင်ပါတယ်။
"နိုင်ငံခြားကို ဒီကျောက်မျက်ရတနာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထွက်ပေါက်က ပြည်ပနိုင်ငံတွေက အကုန်လုံး အမေရိကန်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင် တော်တော်ထိခိုက်မယ်ပေါ့။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘူး၊ အမေရိကန် တနိုင်ငံထဲဆိုရင် တော့ ထိခိုက်မှုက သက်သာမှာပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံက အာစီယံ အဖွဲ့ဝင်တို့ ဖြစ်နေတော့ အဲဒီကလည်း ထွက်နိုင်တယ်။ သို့မဟုတ် တရုတ်နိုင်ငံတွေက ထွက်ပေါက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီးတော့ ထိခိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန် ပြည်အနေနဲ့ အမေရိကန် ဈေးကွက်က ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်မှာ တစိတ်တပိုင်းပဲ ရှိတာ။ ဥပမာ ဥရောပသမဂ္ဂလို၊ တရုတ် ပြည်ပကြီးတို့လို၊ ရေနံနိုင်ငံတွေလို၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေလို အဲဒီလို ဈေးကွက်တွေလည်း ရှိတာပေါ့။ အကုန်လုံးက အမေရိကန်နဲ့ ၀ိုင်းပြီးတော့ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့ နာမှာပေါ့။"
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် အငြိမ်းစားပါမောက္ခချုပ် ဦးမော်သန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလထဲတုန်းကလည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အလားတူ ဒဏ်ခတ်အရေးယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက မြန်မာ စစ်အစိုးရ အတွက် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရနေတဲ့ မြန်မာ့ကျောက်မျက်လုပ်ငန်း၊ သစ်လုပ်ငန်းနဲ့ ပုလဲလုပ်ငန်း တို့ကို အရေးယူ ပိတ်ဆို့မယ့် စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များကို ကျန်းမာရေး နယ်လှည့်ဆရာဝန်များအဖွဲ့ စောင့်ရှောက်
Lisa Schlein’s Report in Burmese -
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မေလဆန်းက တိုက်ခတ်သွားတဲ့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့် ဒုက္ခ
ရောက်ခဲ့သူ ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက် အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့
လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုတွေကို နိုင်ငံတကာ နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများဆိုင်ရာ
အဖွဲ့ (အိုင်အိုအမ်) က ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့
အိုင်အိုအမ်က ပြောပါတယ်။ အိုင်အိုအမ် ဌာနချုပ်ရှိရာ ဂျနီဗာမြို့ကနေ ဗွီအိုအေ
သတင်းထောက် လီဆာ ရှလိုင်း (Lisa Schlein) သတင်းပေးပို့ထားတာကို
လူသူအရောက်အပေါက်နည်းပြီး ခရီးသွားဖို့ ခက်ခဲလှတဲ့ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ
မုန်တိုင်းသင့်နေရာတွေက အသက်မသေ ကျန်ရစ်သူ ဒုက္ခသည်တွေဆီ ရောက်အောင်
သွားနိုင်ဖို့အတွက် အလွယ်တကူ ရွေ့ရှားနိုင်တဲ့ ဆေးကုသရေး အဖွဲ့ငယ်လေးတွေ
(Mobile Medical Teams) ကို အရင်ဖွဲ့စည်းရပါတယ်လို့ အိုင်အိုအမ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ
ယွန်း ဖိလစ် ရှောက်ဇေ (Jean -phillippe Chauzy) က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ အဲဒီ
ရွေ့ရှားဆေးကုသရေး အဖွဲ့ငယ်လေးတွေဟာ မြစ်ချောင်း ကျဉ်းကျဉ်းမြောင်းမြောင်းတွေ
ကြားမှာ ရေကြောင်းလမ်းကို အတော်လေး ရှာဖွေပြီး သွားခဲ့ကြရတယ်လို့ သူက ဆိုပါ
တယ်။ သူပြောပြတာကတော့ …
"ကျနော်တို့လုပ်တာက တကယ်တမ်းမှာ အတော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
အင်ဂျင်အောက်ထိုင်ရော၊ အပေါ်ထိုင်ရော နှစ်မျိုးလုံးပါတဲ့ ဇိုးဒီယက်ဆိုတဲ့ ရာဘာလှေ
တွေ တစုတဝေးကြီးနဲ့ မြစ်တွေ ချောင်းတွေထဲ ဟိုရွာဝင် ဒီရွာထွက်နဲ့ အနှံ့သွားခဲ့ကြတဲ့
အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းခဲ့တာပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆေးပစ္စည်းကိရိယာတွေကို
ရွာစဉ်ရွာတိုင်း သွားလေရာ ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ ဒါက ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းကြီးထဲက အစိတ်အပိုင်းတခုပါ။ မုန်တိုင်းကြောင့် ကျေးရွာ
ဆေးပေးခန်းတွေ လုံးလုံးပျက်စီးသွားတဲ့ ရွာတွေမှာ ယာယီတဲတွေထိုးပြီး ဆေးခန်း
ဖွင့်ခဲ့ကြတာ တဲဆေးခန်း ၁၅ ခု ဖွင့်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။"
အခုအချိန်အထိ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲလှတဲ့ ကျေးရွာ
ပေါင်း ၃၂၇ ရွာက လူနာပေါင်း ၂၅,၀၀၀ နီးပါးကို အိုင်အိုအမ်ရဲ့ ရွေ့ရှားဆေးကုသရေး
အဖွဲ့ငယ်လေးတွေနဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ကုသမှု ပေးခဲ့နိုင်ပါပြီ။ နာဂစ်မုန်တိုင်း
ဟာ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရဲ့ ဆေးရုံဆေးခန်းအားလုံးရဲ့ ၇၅% ကို ချေမွ
ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာပါ။ မသန့်တဲ့သောက်ရေ၊ မသန့်တဲ့အစားအသောက်တွေကြောင့်
လူတွေဟာ မကျန်းမမာတွေဖြစ်၊ အမိုးအကာ မလုံမခြုံနဲ့ အ၀တ်အစား မလောက်ငတာ
တွေဖြစ်၊ အညစ်အကြေးစွန့်မှု ပရမ်းပတာတွေဖြစ်နဲ့ လူတွေဟာ မုန်တိုင်းသင့်ဝေဒနာ
မျိုးစုံကို အပြင်းအထန် ခံစားနေကြရတယ်လို့ ယွန်း ဖိလစ် ရှောက်ဇေကပဲ ပြောပြပါ
အသက်မသေ ကျန်ရစ်ကြတဲ့ မုန်တိုင်းသင့်ဒုက္ခသည်တွေဟာ ဘ၀တသက်တာမှာ
ဘယ်လိုမှ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်ဆိုးကြီးကို ရုတ်တရက် ဆုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ အတွေ့
အကြုံက စိတ်နှလုံး ထိခိုက်ကြေမွသွားရတဲ့အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြှင့်တငကူညီပံ့ပိုး
ပေးဖို့ သိပ်ကိုလိုအပ်နေတယ်လို့လည်း မစ္စတာ ချောက်စီက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
"ကျနော်တို့ရဲ့ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့တွေမှာ လူမှုရေးနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ
ကျွမ်းကျင်သူတွေလည်း ပါဝင်ကြပါတယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်
ပူဆွေးနေတဲ့လူတွေ၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့် ဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေကို သူတို့တွေက
အတတ်နိုင်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး စိတ်ဓာတ်ရေး ကုသမှုတွေ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ
စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ကုသပေးရမှာက ရေရှည်လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးတခုပါ။ ဒီမုန်တိုင်းကြီး
ကြောင့် ညှိုးငယ် စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ လူကြီး လူငယ်တွေကို ကျနော်တို့ ဆက်ပြီး
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။"
ဒီလို ဆေးကုသမှုတွေအပြင် တိုက်ရိုက် ကျန်းမာရေး ကူညီစောင့်ရှောက်မှုတွေအဖြစ်
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ နေထိုင်နိုင်ကြဖို့ တာပေါ်လင် ဖျင်စတွေ၊ သန့်ရှင်းတဲ့ရေပုံး
တွေ၊ ရေသန့်ဖို့ခပ်တဲ့ ကလိုရင်းဆေးတွေ၊ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းဖို့ အသုံးအဆောင်တွေ
နဲ့ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းထားတဲ့ ခြင်ထောင်တွေကိုပါ မုန်တိုင်းသင့်ဒုက္ခသည်တွေကို
မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှု အမေရိကန်ထပ်တိုး
Michael Bowman’s Report in Burmese
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းမှု ပိတ်ပင်သည့်ဥပဒေကို သမ္မတဘုရှ် လက်မှတ်ရေးထိုးနေစဉ်။ ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၀၈။
မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် စစ်အစိုးရက ဖိနှိပ်နေမှုတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ရော ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
ကြည်ကို ဆက်ပြီး ဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက်ပါစစ်အစိုးရကို အရေးယူဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ထဲက မြန်မာနိုင်ငံက ကုန်
ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းမှုကို အမေရိကန်ကပိတ်ပင်ထားတာကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ သမ္မတဘုရှ် (Bush) က လက်မှတ်ထိုး သက်တမ်း
ထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံက ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို တတိယ
နိုင်ငံတွေကတဆင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆီ တင်သွင်းမှုကို တားမြစ်တဲ့ဥပဒေ
ပါဝင်တဲ့ Block Burmese Jade Act ဥပဒေကိုလည်း သမ္မတက လက်မှတ်ရေးထိုး
အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မိုက်ကယ်
ဘိုးမန်း (Michael Bowman) သတင်းပေးပို့ထားတာကို မစုမြတ်မွန်က တင်ပြပေးထား
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အိမ်ဖြူတော်မှာလုပ်တဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ မတိုင်ခင်မှာ သမ္မတ
"မြန်မာအစိုးရသိဖို့ ကျနော်တို့ ပြောချင်တာကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ
ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ယုံကြည်တယ်ဆိုတာပါပဲ။"
မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးတဲ့ ခုလို ဥပဒေတွေကို လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ပွဲမှာ
သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရှ် (Laura Bush) နဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တချို့ တက်ရောက်
ပါတယ်။ သူတို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရရှိပြီး လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ
တိုးတက်ဖို့ တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်သွားခဲ့တဲ့ ကွယ်လွန်သူ လွှတ်တော်အမတ်
တွမ် လန်းတို့စ် (Tom Lantos) ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ စစ်အသုံးစရိတ်နဲ့ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးတွေအတွက် အဓိကဖြစ်နေတဲ့
နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေကို ပိတ်ဆို့နိုင်ရေး ရည်ရွယ်တဲ့ Block Burmese Jade Act လို့
အမည်ရတဲ့ ဥပဒေဖြစ်လာဖို့အတွက် မစ္စတာ လန်းတို့စ်က ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာ
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ကျောက်စိမ်းနဲ့ ပတ္တမြား တင်ပို့ရောင်းချမှုကနေ တနှစ်ကို အမေ
ရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၃၀၀ လောက် ၀င်ငွေရှိနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဒီ
ဥပဒေထဲမှာ မြန်မာ့ကျောက်မျက်တွေကို တတိယနိုင်ငံတွေကတဆင့် အမေရိကန်
ပြည်ထောင်စုဆီ တင်သွင်းမှုကို တားမြစ်တဲ့ဥပဒေ တခုထဲမဟုတ်ဘဲ မြန်မာစစ်အစိုးရ
နဲ့ စစ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီး စီးပွားရေးအမြတ်ထုတ်နေသူတွေရဲ့ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေ
ထိန်းချုပ်တာကို သမ္မတကိုယ်တိုင်က ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ အမေရိကန်သမ္မတက
ခန့်အပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ်ထားရှိရေး၊ မြန်မာ
နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကို အမေ
ရိကန်အစိုးရက တိုးပေးရေးတို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ခုလို မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်အစိုးရက အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေ လုပ်နေပေ
မယ့် ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ ဝေဖန်နေကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး
အိမ်ဖြူတော်ပြောခွင့်ရသူ ဒေနာ ပရီနို (Dana Perino) က ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာ
ထိရောက်မှုရှိပါတယ်လို့ မနေ့က အိမ်ဖြူတော်မှာလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ
ဖြေသွားပါတယ်။ အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာ ထိရောက်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ စစ်အစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးနိုင်ဖို့ အမေရိကန်က တနိုင်ငံထဲအနေနဲ့ရော၊
နိုင်ငံစုံအနေနဲ့ပါ အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေကို လုပ်နေတာပါ။ အမေရိကန်ရဲ့ ရည်ရွယ်
ချက်က ပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်နေတဲ့ အစိုးရကို ဖိအားတွေ တိုးပေးဖို့ပါ။ ပြည်သူတွေကို
ထိခိုက်စေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ နိုင်ငံတွေက ပြည်သူတွေ
အတွက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့တွေကို အမေရိကန်က ရက်ရက်
ရောရော ပေးနေတာပါလို့ အိမ်ဖြူတော်ပြောခွင့်ရသူ ဒေနာ ပရီနိုက ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာရှပစိဖိတ်ဒေသက မူလတန်းကျောင်းနေရမဲ့အရွယ် ကလေးငယ် ၂၇ သန်းဟာ ကျောင်း မတက်နိုင်ပဲ ကလေးအလုပ်သမားတွေအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ ရှိနေကြရတယ်လို့အိုင်အယ်လ်အို (ILO) အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ကြီးရဲ့ လတ်တလော ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်၊ မြန်မာပြည် က ကလေးငယ်တွေဟာ စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းတွေမှာ အများအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် ဆောက်လုပ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး၊ သန့် ရှင်းရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အိမ်တွင်းစက်လက်မှုနဲ့ အိမ်ဖေါ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။
(ကလေးအလုပ်သမား) "ကျနော်က ၁၃ နှစ်ပါ၊ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေလို့ဒီမှာ လာအလုပ်လုပ်နေတာပါ၊ ကျနော်ရတဲ့ လခ လေးကို ပုံမှန် ပို့ ပေးနေရပါတယ်၊ ကျနော် ကျောင်းအရမ်း တက်ချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်လို့မတက်ရပါဘူး။ ကျနော် ၆ တန်းမှာ ကျောင်းထွက်လိုက်ပါတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ဒီမှာလာအလုပ်လုပ် နေတာပါ။ ကျနော် တောင်ဒဂုံမှာ နေပါတယ် ပြည်ရေးကို လေးစားတန်ဘိုးထားတတ်တဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ကျောင်းနေရမဲ့အရွယ်တွေကို ကျောင်းထားတဲ့နူန်း ၈ဝ ရာခိုင်နူန်းကျော်ရှိပေမဲ့ ကျောင်းပြန်ထွက်သွားတဲ့နူန်းကလည်းမြင့်မားနေပြီး မူလတန်း ပညာရေး ပြီးဆုံးသူဦးရေဟာ ၅၅ ရာခိုင်နူန်းတောင်မရှိဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ အရေးပေါ်ရံပုံငွေအဖွဲ့ ယူနီဆက်ဖ်ရဲ့ အစီရင်ခံစာက ဖေါ်ပြထားပါတယ်။"
(စားပွဲထိုးကလေးငယ်) "ကျနော်တို့မောင်နှမ ၂ ယောက်ရှိတယ်။ အဖေက အခု လောလောဆယ် ကွက်သစ်မှာ ထင်းထမ်းနေတာ လေ၊ အမေက ကလေးနဲ့ဆိုတော့ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ကျနော်တို့ပဲ ရှာကျွေးနေရတယ်။"
မေး ။ ။ မင်းကျောင်းနေချင်တဲ့စိတ် မရှိဘူးလား?
ဖြေ ။ ။ ဟာ၊ ရှိတာပေါ့ဗျာ၊ စီးပွါးရေးအဆင်မပြေလို့မနေတာပေါ့၊ ဒီလကုန်ရင် ထွက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။
မေး ။ ။ ထွက်ပြီး ဘာလုပ်မလဲ?
ဖြေ ။ ။ ထွက်ပြီး လစာပိုရတဲ့ဆိုင် သွားလုပ်ရမှာပေါ့၊ ဒီဆိုင်မှာ လခက ၅ဝဝဝ ပဲရတာလေ၊ ၅ဝဝဝ က နည်းတယ်၊ အိမ်ပေးရတာနဲ့ ကုန်နေတာ၊ ဟိုဆိုင်က ၇ဝဝဝ လေ၊ ၁ လ ကို ၂ဝဝဝ ပိုနေတာပဲ၊ ကျနော့်ညီကို ကျောင်းထားနိုင်မှာ ပေါ့၊ ကျနော့်လို စာမတတ်မှာစိုးလို့လေ။
(ကလေးအလုပ်သမား) "ကျနော့်မိသားစု ၇ ယောက်ရှိပါတယ်၊ အဖေရော၊ အမေရော ရှိပါတယ်၊ မိသားစု အဆင်မပြေလို့ ရန်ကုန်မှာ လာပြီး အလုပ်လုပ်နေရတာပါ၊ ကျနော်အိမ်ကို ပိုက်ဆံ ပုံမှန် ပို့ပေးနေရပါတယ်။"
ကလေးအလုပ်သမားတွေဟာ တနေ့ကို အလုပ်ချိန် ၁၂ နာရီလောက် အလုပ်လုပ်ကြရပြီးတော့ အများအားဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲ နေထိုင်ကြပါတယ်၊ ကိုယ့်ဒေသထက် ဝင်ငွေပိုကောင်းတဲ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးစတဲ့မြို့ ကြီးတွေမှာသာမကပဲ အိမ်နီးချင်း ထိုင်း၊ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာလည်း မြန်မာပြည်သား ကလေးငယ်တွေဟာ အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေးသူငယ်တွေကို လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ ခိုင်းစေတာတွေကို ၁၉၉၃ ခု ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့ တားမြစ်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း လူစည်ကားတဲ့ ဒေသတွေမှာတော့ ကလေးအလုပ်သမားတွေ အလုပ်လုပ်နေ တာမျိုး မတွေ့မရှိရအောင် လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်တွေက တရားဝင်မဟုတ်ပဲ ညွှန်ကြားတာတွေရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်၊ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) အဖွဲ့ကြီးကတော့ လာမဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုမှာ ကမ္ဘာတဝှမ်း ကလေး အလုပ်သမားတွေ ပပျောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဘို့ စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။